Travel World: June 2012
မောင်တောမြို့နယ် မဲဆန္ဒရှင်များမှ နိုင်ငံသားမဟုတ်သော
Written by မင်းသွိး Tuesday, 20 March 2012 10:09 PDF Print E-mail
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၄ရက်နေ့၌ မောင်တောမြို့နယ် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများမှ
နိုင်ငံသားမဟုတ်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၃)ဦးအား
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန် ပြည်ထောင်စု
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသော ဦးအောင်ဇော်ဝင်း (ခ) ဇော်ကီးအာမတ်၊
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့သူများဖြစ်ကြပြီး
ကုလားလူမျိုးများဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ မောင်တောမြိ့နယ်မှ ဦးမောင်အုန်းက
"ဒီလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၃)ဦးဟာ နိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ကြဘူး၊
ဧည့်နိုင်ငံသားဘဲဖြစ်တယ် အဲဒါကြောင့် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေနဲ့
မကိုက်ညီတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ရွေးကောက်ပွဲကင်မရှင်ကို
ဥပဒေလေ့လာနေသူတစ်ဦးဖြစ်သော ကိုကျော်ထွီးမှလည်း အခုလိုပြောကြားသွားပါတယ်
"နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ဆိုရင် ဧည့်နိုင်ငံသားဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ
၀င်အရွေးခံတာကိုမပြောနဲ့ မဲပေးပိုင်ခွင့်တောင်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဧည့်နိုင်ငံသားတွေဟာ မဲလည်းပေးလို့ရတယ်၊
တချို့ဆိုရင် မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ ၀င်အရွေးခံလို့တောင်ရကြတယ်"
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကင်မရှင်သို့ တင်လိုက်သော စာတွင်
မောင်တောမြို့နယ်မှ မဲဆန္ဒရှင် စုစုပေါင်း ၂၅၇၄၄၁ ထဲမှ ၄၁၃၉ဦး
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊မတ်လ(၁၄)ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ
၃၉၆(က) (၄)ပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့် ငြိစွန်းသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ
အား တာဝန်များမှ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းပေးပါရန် ပုဒ်မ ၃၉၆ (ခ)ပါ ပြဌာန်းချက်
မောင်တောမြို့နယ် မဲဆန္ဒရှင် စုစုပေါင်း (၂၅၇၄၄၁)၏
၁%ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြစ်သော ပူးတွဲစာရင်း၌ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်များက အောက်ပါအတိုင်း လေးစားစွာ တင်ပြလျှောက်ထားအပ်ပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၁၂၀(ခ)၊ ပုဒ်မ-၁၅၂(ခ)နှင့် ပုဒ်မ-၁၆၉
(က)တို့တွင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရည်အချင်းနှင့် ပတ်သက်၍
''နိုင်ငံသားမိဘ နှစ်ပါး မှ မွေးဖွါးသော နိုင်ငံသားဖြစ်သူ'' ဖြစ်ရမည်ဟု
ပြဌာန်းထားပါသည်။ သို့ရာတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ -
၁၀ (င)၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ-၁၀(င)၊ တိုင်းဒေသကြီး
မိဘတစ်ပါးပါးမှ ဖြစ်စေ နှစ်ပါးစလုံးမှ ဖြစ်စေ မွေးဖွါးသည့် နိုင်ငံသား''
ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့် မရှိစေရဟု
ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပချိန်တွင်
ရွေးကောက်ခံသူသည်နှင့် ၎င်း၏မိဘနှစ်ပါးစလုံး သည် တနည်းနည်းဖြင့်
၂။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ ပုဒ်မ-၃တွင်
အောက်ပါအတိုင်းပြဌာန်းထားပါသည်။ ''နိုင်ငံတော် တွင်ပါဝင်သော
နယ်မြေတစ်ခုခု၌ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၈၅-ခုနှစ် ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၂၃ ခုနှစ်
မတိုင်မီကာလမှစ၍ ပင်ရင်းနိုင်ငံအဖြစ် အမြဲနေထိုင်ခဲ့သော ကချင်၊ကယား၊ကရင်၊
ချင်း၊ဗမာ၊ မွန်၊ရခိုင်၊ရှမ်းစသည့် တိုင်းရင်းသားများနှင့်
ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးအဖွဲ့ မှ
(၂၀-၉-၁၉၈၃)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၁၃/၈၃အရ ထုတ်ပြန်ထားသည့်
မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း (နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း)အပိုဒ်(၄)တွင် ''၁၈၂၄ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်မြန်မာ
သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်သည် '' ဟုထပ်ဆင့် ရှင်းလင်းထားပါသည်။ ထိုဥပဒေပုဒ်မ - ၅
အရတိုင်းရင်းသားတိုင်းသည် လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသား မိဘနှစ်ပါးမှ
မွေးဖွါးသူတိုင်းသည် လည်းကောင်း မွေးရာပါ နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြပါသည်။
၃။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေပုဒ်မ-၃တွင် ဖော်ပြထားသည့်
တိုင်းရင်းသားများနှင့် မျိုးနွယ်စု မဟုတ်သော လူမျိုးများသည် လူမျိုးအရ
မြန်မာနိုင်ငံသားများမဟုတ်ပါ။ ထိုအခြားလူမျိုးများအနေဖြင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ်
ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၁(ဃ)အရ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား ပြစ်မှုအက်ဥပဒေ၊ ၁၉၄၈
၄။ အထက်ပါ တင်ပြချက်များအရ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်လျက်ရှိကြသော
''ဘင်္ဂလီ''လူမျိုးများ သည် လူမျိုးအရ နိုင်ငံသားများမဟုတ်ကြောင်း
ထင်ရှားနေပါသည်။ ထို ဘင်္ဂလီလူမျိုးများအနေဖြင့် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရယူလိုပါက
၅။ ထို ဘင်္ဂလီတချို့က ၎င်းတို့သည် နှစ်ပေါင်း ထောင်နှင့်ချီ၍
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်လာကြသော ''ရိုဟင်ဂျာ''လူမျိုး
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌လည်း ကောင်း သမိုင်းလိမ်ဖြင့်
၀ါဒဖြန့်ချိတင်ပြနေကြပါသည်။ ထိုကိစ္စကို လူကြီးမင်းတို့က မျက်စိကြီး
နားကြီးဖြစ်၍ ပိုမိုသိရှိ ကြလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်သဖြင့် အကျယ်ချဲ့၍
တင်ပြခြင်း မပြုလိုတော့ပါ။ သို့သော် ထိုသမိုင်းလိမ်ကိစ္စသည် ရခိုင်တိုင်း
ရင်းသားများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သော ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံး၏
အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးနေ သည့် ကိစ္စတရပ်ဖြစ်ကြောင်း လေးနက်စွာ
၆။ ''ရိုဟင်ဂျာ''လူမျိုးဆိုသည်ကို ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသား
ဥပဒေပုဒ်မ-၄ အရ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ် စုဖြစ်သည်ဟု
ကြေငြာဆုံးဖြတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၊
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ အစိုးရကလည်း
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ''ရိုဟင်ဂျာ''ဟု ခေါ်သော တိုင်းရင်းသားမရှိကြောင်း
ကမ္ဘာသိ အတိအလင်း ကြေငြာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၇။ သို့ပါလျှက် ဘင်္ဂလီလူမျိုးများဖြစ်ကြသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်
မောင်တောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်တို့က ''ကျွန်တော်တို့
ထုတ်ပေးနိုင်သည့် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ်(ပန်းရောင်)ကို
ထုတ်ပေးသင့်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊
ဒီမိုကရေစီ ရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီ ဒုဥက္ကဌထံသို့
(၁၁-၂-၂၀၁၂)ရက်စွဲပါ စာဖြင့် တင်ပြတောင်းဆို ဖော်ပြသည်ဟု သိရှိ ရပါသည်။
၈။ ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော မဲဆန္ဒနယ်မှ-
(၁) ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ဇော်ဝင်း
(ခ) ဇော်ကီးအာမတ်သည် ယခုအခါ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကဒ်ပြား အမှတ်
၁၂/ပဘတ(နိုင်)၀၂၉၉၅၁ ကိုင်ဆောင်ထားသော်လည်း ၎င်း၏ မိဘများဖြစ်သော
ဘင်္ဂလီလူမျိုး(ဘ)ဦးနူရ်အာလမ်(၁၁/မတန(ယ)၀၉၂၂၂၆)နှင့် (အမိ) ဒေါ်ခေါ်တီဇာ
မွေးဖွါးခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။၎င်းသည်တရားဥပဒေနှင့်အညီ မဟုတ်ဘဲ ရန်ကုန်မြို့၊
ဒဂုံမြို့နယ်၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ အိမ်အမှတ် (၆)၊ အခန်း
ရရှိထားသူများ ဖြစ်သဖြင့်နိုင်ငံသားမဟုတ်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဌေးဝင်း(ခ)ဇာယာဒ်ရော်မန် သည် ယခင်က
ဟာဘီကျေးရွာတွင် (၃-၄-၁၉၆၂)ခုတွင် မွေးဖွါးသူဖြစ်ပါသည်။
၎င်း၏ယခင်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်မှာ (MDW ၂၄၇၄၇၇)ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ
၁၁/မတန(ယ)များကို ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရသော်လည်း နိုင်ငံသားများ မဟုတ်ပါ။
သို့ရာတွင် တနည်းနည်းဖြင့် အမှတ်(၂၆)၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြို့၌ နေထိုင်ခွင့် ရရှိနေပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မျိုးမင်း(ခ)ဇာဟိန်းဂိရ် သည်
ဘင်္ဂလီလူမျိုး (အဖ)ဦးရော်ရှီးအာမတ် (AK၀၁၅၆၁၈)နှင့် (အမိ)ဒေါ်ဒူဘာဟာရ် (AK
မွေးဖွါးသူဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ ယခင်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားအမှတ်မှာ (AK
195265)ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ၁၁/မတန(ယ)ကို ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရသော်လည်း
၉။ ၁၉၄၉-ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ
မှတ်ပုံတင်ရေး အက်ဥပဒေနှင့် ၁၉၅၁ ခုနှစ်
နည်းဥပဒေတို့အရ ယခင်က ထုတ်ပေးခဲ့သော အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားသည်
''မည်သူ မည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း''သက်သေခံအတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ သား
ထို့အပြင်ဧည့်နိုင်ငံသားအဖြစ်သို့ပင် မရောက် ရှိသေးပါ။
ရရှိထားသူများ လည်း မဟုတ်ကြပါ။ ထိုပုဂ္ဂိုလ် သုံးဦး၏
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရပ်တည်နေမှုသည် အထက် အပိုဒ်(၁)တွင် တင်ပြခဲ့သော
ဥပဒေများနှင့် ငြိစွန်းနေသူများသာ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
၁၀။ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်
ဆက်စပ်နေသဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး ၏ အကျိုးအတွက်သော် လည်းကောင်း၊
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ အကျိုးအတွက်သော် လည်းကောင်း၊ အလွဲအသုံးပြု ခြင်းသည်
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာနှင့်စပ်လျဉ်း၍
အလွန်အန္တရာယ်များသော ဆောင်ရွက်ချက် တရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုပင်လျှင်
နိုင်ငံတော်၏ တရားဝင်ရပ်တည်ချက်ကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး မရှိသော
လူမျိုးတစ်မျိုးကို ဖန်တီးလျက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း
၁၁။ ယခုအခါ မည်သည့် (လ၀က)ဌာနကမှ မိမိတို့ကိုယ်ကို
''ရိုဟင်ဂျာ''လူမျိုးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလျှောက် ထားသူကို (ယ)ဖြစ်စေ
(ဧည့်)ဖြစ်စေ (နိုင်)ဖြစ်စေလျှောက်ထားသော လျှောက်လွှာတွင်
(ဘင်္ဂလီ)လူမျိုးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသူများက မိမိတို့သည်
(ဘင်္ဂလီ)လူမျိုးမဟုတ်ဘဲ (ရိုဟင်ဂျာ) လူမျိုးဖြစ်သည်ဟု တင်ပြလာခြင်းမှာ
ပုဒ်မ-၃၉၆ (က) (ခ)ပါနိုင်ငံတော်၏ ကျေးဇူးသစ္စာတော်ကို
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၃၉၆ (က)(၄) နှင့်အညီ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်များ မှပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေးပါရန်၊ ပုဒ်မ-၃၉၆(ခ)
Written by ဦးအောင်ကိုကို Thursday, 28 June 2012 00:00 PDF Print E-mail
UNHCRရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဒီသီတင်းပတ်တွေအတွင်း တွေ့မြင်ကြားသိနေရတဲ့
အရေးအခင်းကတော့ တကယ်ဘဲ ရင်နာစရာကောင်းလွန်းလှပါတယ်။
ခွဲခြားသုံးသပ်ကြပါတယ်။ အခုဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေရဲ့အကြောင်းရင်းကို
သတင်းမီဒီယာတွေကတော့ ကျောက်နီမော် ပြဿနာကြောင့်လို့ ဖော်ပြ၊
ထုတ်လွှင့်ပြသနေခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ဒါဟာ
ကျွန်တော်ကတော့ ကျောက်နီမော်ပြဿနာဆိုတာ လတ်တလောအကြောင်းရင်းလို့ပဲ
သုံးသပ်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ ကျောက်နီမော်ပြဿနာ မဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း
ဒီအရေးအခင်းက ဖြစ်လာမှာပဲလို့ သုံးသပ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့
အကြောင်းရင်းခံတွေက ရှိနေပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါ။ မီးစာ
(လောင်စာ)လည်းရှိနေတယ်၊ လောင်စာဆီလည်း ရှိနေတယ်၊ မီးတောက်ဖို့အတွက်
မီးစတစ်စပဲ လိုတော့တာပါ။ ကျောက်နီမော်ပြဿနာဆိုတာ မီးစလေးတစ်စပါပဲ။
တောင်ကုတ်ပြဿနာဆိုတာလည်း မီးထတောက်ဖို့ စတင်နေခဲ့တဲ့ အခြေအနေပါ။
အဲဒီမီးစကို လေပင့်ပေးလိုက်တာက (ကုလား - မူစလင်)ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ ပြဿနာပါ။
ပထမဆုံးတင်ပြချင်တဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊
တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှုဆိုတဲ့ ပြဿနာပါပဲ။ ပညာရှင်တွေရဲ့တင်ပြချက်တွေ
ရှိနေပြီးဖြစ်တော့ ဒီနေရာမှာ သမိုင်းကြောင်းကို မတင်ပြလိုတော့ပါဘူး။
နိုင်ငံသားမဖြစ်သင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို နိုင်ငံသားမဖြစ်ကြောင်း၊
နိုင်ငံတော်အစိုးရ အဆက်ဆက်ကပါ ပြတ်ပြတ်သားသား
လူ့အခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး မတူဘူးဆိုတာကို သတိပြုကြရပါမယ်။
အစဉ်အဆက် နိုင်ငံရေးပါတီတွေက မဲရလိုမှုတစ်ခုတည်းနဲ့
မပေးသင့်တဲ့အခွင့်အရေးကို ပေးခဲ့တာ၊ ကိုယ်ကျိုးရှာအကျင့်ပျက် ၀န်ထမ်းတွေ
(ကျွန်တော်ကတော့ အကျင့်ယုတ်ဝန်ထမ်းတွေလို့ ပြောချင်ပါတယ်) ရဲ့ ငွေကြေး၊
ဥစ္စာပစ္စည်းရလိုမှုတစ်ခုတည်းနဲ့ မလုပ်သင့်တာတွေကို လုပ်ခဲ့ကြ၊
လုပ်နေကြတာတွေဟာလည်း အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲ။ အဲဒါတွေကြောင့်ပဲ နောက်ဆုံး
အခုအချိန်မှာ လွှတ်တော်ထဲအထိဝင်ပြီး မတန်မရာတွေတောင်းဆိုရဲကြတာပါ။
ဒီပြဿနာကို အခုအချိန်မှာ ကျေလည်အောင်ရှင်းလင်းဖို့အချိန်ကျပြီလို့
သိပ်မကြာသေးတဲ့ကာလ (၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ)ထဲမှာ ဘင်္ဂလီတွေ
အဲဒီခေါ်တောတွေဟာ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသမှာ အဓိကလှုပ်ရှားမှု တစ်ခုကို
ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါ။ ဒီနေရာ၊ ဒီဒေသကို
သူတို့အပိုင်သိမ်းထားနိုင်ပြီလို့ ကြေငြာလိုက်တာပါပဲ။ ဒီလှုပ်ရှားမှုကို
လူတွေသိပ်မသိလိုက်ပေမယ့် သိပ်မကြာခင် သူတို့တွေဒီထက်ပိုပြီး
လှုပ်ရှားလာတော့မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့မိပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ
ARAKAN အမည်ကို သူတို့ကအလွဲသုံးစားလုပ်၊
အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက
အရေးအခင်းကို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် ကျွန်တော်တို့
ဒီကိစ္စကို ဗမာအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားအားလုံးက
ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရပါမယ်။ ကုလားဆိုတဲ့ ဝေါဟာရတစ်ခုကို သူတို့တွေက
ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်သလို ကျွန်တော်တို့ကလည်း ခေါ်တောတွေက
ဒီလိုမူဆလင်တိုင်းရင်းသားလို့ပြောတာကို ကန့်ကွက်ရပါမယ်။ လွှတ်တော်ထဲမှာအထိ
အရေးဆိုကြဖို့ ကိုယ်စားလှယ်များကို တောင်းဆိုတင်ပြလိုပါတယ်။ ဒီ
ခေါ်တောတွေဟာ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံသားမဟုတ်ကြောင်း
ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်ကြေငြာပေးဖို့ အားလုံးက
၀ိုင်းဝန်အရေးဆိုကြဖို့ကိုပါ တင်ပြတောင်းဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက
ရိုဟင်ဂျာပြဿနာပါ။ နိုင်ငံသားပြဿနာနဲ့ ဒီရိုဟင်ဂျာပြဿနာဟာ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေအသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်
ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ အမှန်တကယ် ဒုက္ခတွေ့ကြုံခံစားရတာက
တိုင်းရင်းသားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်းတောမြို့မှာ ခေါ်တောတွေရဲ့
အိုးအိမ်စည်းစိမ် ဆုံးရှုံးခဲ့တာမရှိခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့်
ခေါ်တောတွေပါပဲ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရက လက်မခံနိုင်လို့
ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း
ဒုက္ခသည်အမည်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့
ပတ်သက်လှုပ်ရှားနေကြတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း သူတို့နိုင်ငံမှာ
လက်မခံနိုင်ပါလို့ ထုတ်ပြန်တာကို ကြားသိရပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးက
တစ်ညီတည်း၊ တစ်သံတည်း ထွက်လာတာကတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဒီနိုင်ငံမှာမရှိဘူး
ဆိုတဲ့အသံပါ။ လောလောဆယ် ဒီရိုဟင်ဂျာလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ RSO လက်နက်ကိုင်
လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အကာအကွယ်ပေး၊ ကူညီပေးနေတာက UNHCR နှင့် လက်အောက်ခံ INGO
တစ်ချို့ပါပဲ။ UN အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ INGO တွေ
အတူတူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းအချင်းချင်း ရိပ်မိသိရှိပြီး နီးစပ်ရာ၊
ဒါတွေက လက်ဆုပ်လက်ကိုင်နှင့် သက်သေထုတ်ပြတိုင်ကြားဖို့ခက်ခဲတဲ့
အခြေအနေမျိုးပါပဲ။ သတင်းတွေဟာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့လဲ မငြင်းနိုင်တဲ့
အခြေအနေပါ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း မောင်းတောမြို့ ခမောင်းဆိပ်မှာ
ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှု အမှုတစ်ခုမှာ မောင်းတော UNHCR
၀န်ထမ်းတချို့ ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ အခုလတ်တလောစစ်ဆေးအရေးယူမှုတွေမှာလည်း
UNHCR ရုံးမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ၊ မိတ်ဖက် INGO တွေက
၀န်ထမ်းတွေ ပါဝင်နေတယ် ဆိုတာလည်း ကြားသိနေရပါတယ်။
(၈-၆-၂၀၁၂)ရက်နေ့၊ မောင်းတောမြို့အရေးအခင်းပြီးတာနဲ့ တစ်ဆက်တည်း
ဖြစ်ပေါ်လာတာက စစ်တွေအရေးအခင်းပါ။ မောင်းတောမြို့မှာ တိုင်းရင်းသားတွေ
ဒုက္ခတွေ့ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာ UNHCR ရုံးက ဘာမှအရေးယူဆောင်ရွက်လာတာကို
မတွေ့ရတဲ့အပြင် ယာယီခိုလှုံဖို့တောင်းခံတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်း
လောက်လောက်လဲလဲ နေရာပေးကူညီတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ သို့သော် တခြား ခေါ်တော
တွေကိုတော့ သီးသန့်နေရာပေးထားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
မူစလင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်နေတယ်လို့ သံသယရှိလို့
ယခုလောလောဆယ် စစ်ဆေးခံနေရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေပါတယ်)
စစ်တွေမြို့အရေးအခင်းမှာကျတော့ သူတို့ခေါ်တောတွေ ခံနေရတယ်လို့
သတင်းတွေထွက်လာတာနဲ့ UN အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာ
စစ်တွေမြို့ကို အပြေးအလွှား ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။ ဒါဟာစဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့
အချက်ပါပဲ။ နိုင်ငံတော်ကမည်သူဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ပါစေ
ဒီနေရာမှာ မောင်းတောမြို့ UNHCR ရုံးရဲ့
လုပ်ငန်းတစ်ချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တင်ပြချင်ပါတယ်။ ဒုက္ခသည်အမည်ခံ
ခေါ်တောတွေကို စားဝတ်နေရေး အကူအညီပေးနေတာပါ။ UNHCR ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို
အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့အတွက် INGO တွေကို Partner အဖြစ်နဲ့
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေထဲမှာ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊
ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်တွေအပြင် UNHCR ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေထဲမှာ
နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ခုက Imigration
နဲ့ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေပါ။ အဲဒီအထဲက သိသာထင်ရှားတဲ့တစ်ခုကို
ဖေါ်ပြချင်ပါတယ်။ တရားမ၀င်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှု (လ၀က မှု/၁၃(၁) လို့
သိကြပါတယ်) တွေကို ဖမ်းမိအရေးယူတဲ့အခါမျိုးမှာ
တရားခံကိုရုံးတင်စစ်ဆေးတဲ့ခါ တရားခံဘက်က ခုခံချေပဖို့အတွက် ရှေ့နေကို
UNHCR က ငှားရမ်းပေးပြီး၊ ကုန်ကျစရိတ်ကိုပါ ကျခံပေးပါတယ်။ ဒါဟာ
ဘာသဘောပါလဲ။ ဒီလိုပြစ်မှုမျိုးကို UNHCR က ကူညီထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ဆိုတာ
နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုကျူးလွန်တာကို UNHCR က ထောက်ခံထားတဲ့ သဘောပါသလား၊
ဆက်လက်ကျူးလွန်ကြဖို့ အားပေးနေတဲ့သဘောလား၊ စဉ်းစားစရာအလွန် ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်နားလည်ထားတာက UN ဖြစ်ဖြစ်၊ တခြား Agencies ဖြစ်ဖြစ်၊ INGO
တွေပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ တရားဝင် MOU (နားလည်မှုသဘောတူညီချက်)
ရှိမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတော်က UNHCR ကို
ဒီလောက်ထိတော့ ဆောင်ရွက်ဖို့ သဘောတူထားလိမ့်မယ် မထင်မိပါဘူး။ ဒီ MOU
တွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လည်း တောင်းဆိုပါတယ်။
UNHCR ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာ တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာ ဆက်စပ်နေတော့ UNHCR ရဲ့ Speed Boat တွေက နတ်မြတ်တလျောက်
အစုန်အဆန်သွားလာနေကြပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကြတဲ့
၀န်ထမ်းတွေကလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ရခိုင်ပြည်ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းမရှိ
ကူးသန်းနိုင်နေကြပါတယ်။ ဒီ့အပြင်ကူးသန်းနေကြတဲ့ UN ၀န်ထမ်းတွေဟာ
ခေါ်တောတွေဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ဒါတွေကိုထောက်ချင့်ခြင်းအားဖြင့် တဖက်က
အယ်လ်ကိုင်ဒါ၊ တာလီဘန်၊ အာရ်အက်စ်အို၊ ဂျမားလ်အစ္စလာမီယာ စတဲ့
အခွင့်အလမ်းအင်မတန် များပါတယ်။ နောက်ပြီး ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောလို
ဒေသမျိုးမှာ Internet ဆက်သွယ်ရေးဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ မရှိပါ။ UNHCR
တစ်ခုတည်းမှာပဲ (၂၄) နာရီ အကန့်အသတ်မရှိ သုံးစွဲခွင့်ရရှိထားပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ အချိန်မရွေးဆက်သွယ်ခွင့်
ရရှိသွားပါတော့တယ်။ သူတို့အနေနဲ့ သတင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ဖို့
အလွန်လွယ်ကူနေသလို ပြင်ပကလည်း သတင်းတစ်ခုကိုလက်ခံဖို့
အလွန်လွယ်ကူနေပါတော့တယ်။ ဒီခေါ်တောတွေအတွက် ရရှိထားတဲ့အခြေအနေတွေက
အကြမ်းဖက်ကွန်ယက်ထဲမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကောင်း
ရရှိထားတာပါပဲ။ ဒီခေါ်တောတွေအတွက်လည်း ဒီလိုအခွင့်အလမ်းကို အမိအရ
ရယူဖို့ကြိုးစားကြတာပါပဲ။ ဒီတော့ ဒုက္ခသည်အမည်ခံတွေဆီကို
အသွားအပြန်လုပ်နေကြတဲ့ UNHCR ၀န်ထမ်းတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာ
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ နောက်ပိုင်းကတည်းက UNHCR ရုံးအပါအ၀င်၊ INGO ရုံးဌာနတွေမှာ
၀န်ထမ်းခန့်ထားမှုတွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ခေါ်တောကုလားလူမျိုးတွေကိုသာ
ပိုမိုဦးစားပေးခန့်ထားပြီး ဒေသခံတိုင်းရင်းသားဝန်ထမ်းတွေ တဖြည်းဖြည်း
တိုင်းရင်းသားတွေကိုခန့်ထားတယ်ဆိုတာလည်း များသောအားဖြင့် Technical
လိုအပ်တဲ့ရာထူးမျိုးတွေမှာပါ။ နောက်ဆုံး တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ကို
မခန့်လျင်မဖြစ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှသာလျင် ခန့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခေါ်တောဝန်ထမ်းတွေကို ဘာဖြစ်လို့တိုးခန့််လာတာလဲ။ တိုင်းရင်းသားဝန်ထမ်းတွေ
ခေါ်တောတွေက UN နှင့် INGO တွေကို အကာအကွယ်ယူဖို့အသုံးချနေပြီး UN နှင့်
INGO တွေမှာ တာဝန်ခံဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံခြားသားတွေ
မသိလို့အလိမ်ခံနေကြတာလား၊ သိသိနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သတ်သက်နေတာလား
နောက်ပြီးသူတို့အခေါ် Vulnerable People, Beneficiary စသည်ဖြင့်
ခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိထားသူတွေဟာလည်း ခေါ်တောတွေချည်းပါပဲ။
တိုင်းရင်းသားထဲက ဘယ်လောက်ပင် ဆင်းရဲနေပလေ့စေ၊ ဘယ်လောက်ပင် ကျန်းမာရေး၊
ပညာရေး အခက်အခဲအမျိုးမျိုးတွေ့နေရပါစေ အကြောင်းတစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုနှင့်
ပယ်ပစ်ခဲ့တာပါပဲ။ မျက်မြင်အထောက်အထားအဖြစ်နဲ့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောဒေသက
စာသင်ကျောင်းအဆောက်အအုံတွေ၊ အဲဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာ ရရှိထားတဲ့
သင်ထောက်ကူပစ္စည်း၊ ပရိဘောဂ အသုံးအဆောင်တွေ ဘယ်လိုရရှိထားတယ်ဆိုတာ
ကြည့်တာနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွေမှာ ကုသဖို့အတွက်
ထောက်အပံ့ရနေတာ ဘယ်သူတွေပါလဲ။ အာဟာရချို့တဲ့မှုအတွက် အထောက်အပံ့ရရှိနေတာ
ဘယ်သူတွေပါလဲ။ နောက်တစ်ခုက ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောဒေသမှာ အနီးစပ်ဆုံး
(၁၅-၆-၂၀၁၂)နေ့မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရေကြီးမှုကိုအကြောင်းပြပြီး
ဒီနေ့အထိအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနေတာတွေပါပဲ။ သဘာဝဘေးဆိုတာ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊
ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာခွဲခြားမှုမရှိပဲ ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမယ့်
ရရှိခဲ့ပါတယ်။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ သောက်ရေ၊ သုံးရေနှင့်
သန့်ရှင်းရေးအစီအစဉ်တွေမှာ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ အိမ်သာ စတာတွေ အထောက်အပံ့ကို
အခုအချိန်ထိ ခေါ်တောရွာတွေပဲ ရရှိခံစားနေတာပါပဲ။
စီမံချက်ဧရိယာတစ်ခုအတွင်းမှာ တိုင်းရင်းသားရွာတစ်ရွာ ပါဝင်နေရင်တောင်မှ
အိမ်ခြေ(၅၀)မပြည့်လို့ ခံစားခွင့်မပေးနိုင်ပါ ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့
ချန်ထားခဲ့တာပါပဲ။ (လူနည်းစုဖြစ်လို့၊ လူများစုဖြစ်လို့ဆိုပြီး
ပြောတဲ့ဆရာမကြီး ကျပ်ကျပ်သတိထားသင့်ပါတယ်) ရင်နာစရာအကောင်းဆုံးက
အကြီးဆုံးနိုင်ငံရေးပါတီကြီးက ရေကြီးမှုအတွက် အကူအညီအဖြစ်
ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်မှာတောင် ခေါ်တောရွာ၊ ခေါ်တောရပ်ကွက်တွေကိုပဲ
ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာပါဗျာ။ (မဲရဖို့ လိုနေတယ်မဟုတ်လား) အဲဒီတော့
ခွဲခြားဆက်ဆံမှု (discrimination) ပြုနေတာ ဘယ်သူတွေပါလဲ။ နောက်ထပ်သူတို့
ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပြောနေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး (Human Right)
ကိုချိုးဖေါက်နေကြတာ ဘယ်သူတွေပါလဲ။ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို
တမင်သတ်သတ်ချိုးဖောက်နေတာ ဘယ်သူတွေပါလဲ။ ဒါတွေဟာ
တင်ပြဖို့တောင်မလိုတော့အောင် ထင်ရှားနေပြီးသားပါ။ မဖြစ်ပါနိုင်ဘူးလို့
ထင်တဲ့သူ၊ မယုံတဲ့သူတွေ ကျွန်တော်တို့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောဒေသကို
လာခဲ့ကြပါ။ ကိုယ်တိုင်လေ့လာဆန်းစစ်ပြီးမှ သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်ကြပါ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စရိတ်ငြိမ်း အစအဆုံးအားလုံးကို တာဝန်ယူပြီး
လိုက်ပြချင်ပါတယ်။ ဒီဒေသကို မလာနိုင်ရင်လဲ ခင်ဗျားတို့ နီးစပ်ရာဒေသကို
ကြည့်ပါ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် က နာဂစ်မုန်တိုင်းကို အမှတ်ရနေကြအုံးမှာပါ။
နောက်ပြီး ၂၀၁၀ ဂီရိမုန်တိုင်း၊ အခု အဲဒီဒေသက ပြည်သူတွေကို
ထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတဲ့ UN အဖွဲ့အစည်း အရေအတွက် ဘယ်နှစ်ခုရှိပါသေးသလဲ။
အရေအတွက်တူညီခဲ့ရင်တောင် (Budget) ရံပုံငွေပမာဏနဲ့ လူဦးရေအချိုး
ဘယ်လောက်ရှိပါသေးသလဲ။ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ - ဒါတောင် သိပ်မကြာသေးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောဒေသမှာ UN အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ INGO တွေ
၀င်ရောက်လှုပ်ရှားနေတာ နှစ်ပေါင်း (၂၀)တောင် ပြည့်ပါတော့မယ် ခင်ဗျား။
ဘူးသီးတောင် - မောင်းတော ဒေသဟာ နာဂစ်လည်း မဖြစ်ဖူးဘူး၊ ဂီရိလည်း
မ၀င်းဖူးဘူး၊ ဆူနာမီဆို ယောင်လို့တောင်
အခုလည်း ဒီအရေးအခင်းအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ အစိုးရကဖိတ်ခေါ်ထားတာကို
ကြားသိလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ် - တကယ်တမ်း UN နဲ့ INGO တွေက
အကူအညီပေးလာခဲ့ မယ်ဆိုရင်လည်း နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့
တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ကို အစီရင်ခံစာမှာဖေါ်ပြနိုင်အောင် ပေးတယ်ဆိုရုံလေး
နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်မက ထပ်ပေးနေဦးမှာပါ။ ဒါက UN, INGO
စတာတွေမှာ ခေါ်တောတွေချည်းကြီးစိုးနေပြီး တိုင်းရင်းသားတွေ
ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတဲ့ အခြေအနေကို ကြုံကြိုက်တုန်း တင်ပြခဲ့တာတွေပါ။
အခုအရေးအခင်းမှာ ခေါ်တောတွေဆီက လက်နက်တွေရရှိထားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့
တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာတာ မတွေ့ရသေးပေမယ့် ယနေ့အထိ သိရှိထားရသမျှတွေအရတော့
အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခေါ်တောတွေ ဘင်္ဂလား - မြန်မာ နယ်စပ်မှာ UN
ကိုအကြောင်းပြပြီး လှုပ်ရှားနေကြတယ်ဆိုတာ မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြနေပါတယ်။
UNHCR ၀င်းထဲမှာ တစ်ညနေခဲ့ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်တွေကလည်း
တိတိကျကျဖေါ်ထုတ်ပြောလာခဲ့တာပါ။ (ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေဟာ ခေါ်တောစကားကို
နောက်ဆုံးဖမ်းဆီးအရေးယူမှုခံရသူတွေထဲမှာ မောင်းတောမြို့ UNHCR
ရုံးဝင်းထဲမှာ ၀န်ထမ်းမဟုတ်ဘဲ ၀င်ရောက်ခိုလှုံနေသူတွေကိုပါ
ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ ဒေသခံတွေပြောတဲ့နာမည်နဲ့ ခေါ်တောတွေ အမှန်တကယ်ပဲ
ဖမ်းဆီးတဲ့အထဲ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် UN ရဲ့ တာဝန်ခံအကြီးအကဲတောင်
သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေက ထိထိမိမိ စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
တစ်ခါ UN အထူးကိုယ်စားလှယ်ကြီးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာ
ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသက ထွက်ပြေးခိုလှုံလာတဲ့ Rohingya (ရိုဟင်ဂျာ)
တွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက လက်ခံပေးဖို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး Rohingya
ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကို မရှိပါဘူး၊ လက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်၊
တင်ပြထားကြပါလျက် အခုလိုထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တွေမှာ ရိုဟင်ဂျာလို့
သုံးနှုန်းသွားခဲ့တော့ UNHCR ဆိုတာ ဒုက္ခသည်အမည်ခံအကြမ်းဖက်သမားတွေကို
အကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းလို့ဘဲ သုံးသပ်ရပါလိမ့်မယ်။ High
Commissioner for Refugees မဟုတ်တော့ပါ။ High Commissioner for RSO
(Rohingya) သို့မဟုတ် High Commissioner for Rebels လို့ပဲ
အားလုံးဟာ သေသေချာချာ အကွက်ချစီမံထားတဲ့ အခင်းအကျင်းတစ်ခု၊ အရေးအခင်းကို
တနည်းနည်းနဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြိုးစားလာခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
တကယ့်အကြောင်းရင်းကတော့ ရခိုင်ဒေသကို ခေါ်တောတွေက
စစ်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။ ဒါဟာ
ရခိုင်ဒေသတစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာ ဟုတ်ပါသလား ခင်ဗျား။
နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်အဆင့်ဆင့်က ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်
ဖြေရှင်းကြမလဲ။ နည်းလမ်းရှာဖို့လိုပါပြီ။ လတ်တလောမီိးငြိမ်းသွားရင်တောင်
နောက်ထပ်မီးတောက် မလောင်ရအောင် လောင်စာကို သေချာရှင်းလင်းဖို့လိုပါပြီ။
မီးရှို့မယ့် လက်တွေကို ဖြတ်ပစ်လိုက်ဖို့ လိုနေပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေမဟုတ်မှန်း လ.၀.က
၀န်ကြီးကလည်း ခေါ်တောလား၊ တိုင်းရင်းသားလားဆိုတာ ခွဲခြားမရဘူးဆိုရင်
ရခိုင်တွေသာသိတယ်၊ ရခိုင်တွေကိုမေးပါလို့ ဆိုထားပါတယ်။
ကျူးကျော်လာတဲ့ခေါ်တောတွေဟာ တိုင်းရင်းသား (လုံးဝ) မဟုတ်၊
ခေါ်တောတွေဟာ နိုင်ငံမဲ့ဒုက္ခသည်တစ်ဖြစ်လဲ အကြမ်းဖက်သမားတွေပါပဲ။
သူတို့တွေနဲ့ နေထိုင်ပုံစရိုက်၊ အသွင်သဏ္ဍန်၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊
ဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့မှ လက်မခံတာကြီးကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ကြီးက
နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တွေထုတ်ပေးပြီး၊ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လွှတ်တော်ထဲ
အ၀င်ခံကြမလို့လား။ နိုင်ငံတကာလှည့်လည်ပြီး ဧည့်သည်ဟာအိမ်ရှင်တွေကို
အနှောင့်အယှက်မပေးရလို့ သြ၀ါဒပေးနေတဲ့ ဆရာမကြီးကိုလည်း
တစ်ခုလောက်တင်ပြချင်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့က
ခေါ်တောတွေကို ဘယ်လိုသြ၀ါဒပေးဦးမှာလဲ ဆိုတာပါ။
ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာက ဒီခေါ်တောတွေကို သနားလှပါတယ်၊
အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ UNHCR တို့၊ INGO
တို့ကနေ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ လှူဒါန်းမယ့်ရံပုံငွေတွေအစား
မိတ်ဆွေတို့နိုင်ငံမှာ ခေါ်တောတွေကို နေရာပေးပြီး ထားပေးလိုက်ကြပါ။
အလှူရှင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ခေါ်တောပြဿနာကို အဲဒီလို အချိုးကျ
ခေါ်ယူဖြေရှင်းလိုက်ကြရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ မိတ်ဆွေတို့လည်း
နိုင်ငံမဲ့ဘ၀က အဆုံးသတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါအကောင်းဆုံးပါပဲ။
Sending about the manner of Immiration from Heho
US ၂ ဦးနဲ့ ခရီးစဉ်ထွက်ခဲ့စဉ်က
-Heho လေယာဉ်ကွင်းမှာ C in လုပ်တော့ လ ၀ က ကောင်တာမှာ pp ပြတုံးထုဘို့
တန်းစီစောင့်တော့-နိုင်ငံခြားသားများတန်းစီနေတဲ့ ရှေ့က ဖြတ်ဝင်နေကြသော
လေယာဉ်ကွင်းအမှုထမ်း များကိုတန်းစီဖို့ ပြောခဲ့တယ်။ဒီတော့-
သူတို့ ကိုကောင်တာဘေးကနေ ခေါ်ပြီး တန်းစီနေသူ များကိုမှမရှက် အရင်ဆောင်ရွက်ပေး
နေကြသော လ ၀ က အရာရှိ အမျိုးသား နဲ့ အမျိုးသမီး ကို နိုင်ငံခြားသူကြီးက
လ ၀ က ၂ ဦးလုံးက မရှက်တတ်ဘူးဗျ စပ်ဖြီးဖြီးပဲကြည့်နေကြတယ်။
ဒီလို တိုင်းပြည်ကိုအရှက်ခွဲနေသောအမှုထမ်းတွေရဲ့ အပြုအမူ တွေကို ဘယ်လို
ပြု ပြင် စေရမလဲ
> On Sunday,
> July 1, 2012, Nyi Nyi ® <nyinyi@gmail.com> wrote:
>> 2012/6/30 Emerald Twentyfive <emerald.twentyfive@gmail.com>
>>> မိသားစုနဲ့ ထပ်တူဝမ်းနဲကြောင်းပြောပါရစေ
>>> တန်ဘိုးမဖြတ်နှိုင်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကြီးပါဘဲ
>>> သားလေးကောင်းရာသုဂတိရောက်စေဘို့ ဆုတောင်းပေးပါမယ်
>>> On 6/30/12, Mandalay Tour Guides Society
>>> <mandalaytourguidessociety@gmail.com> wrote:
>>> > ဧည့်လမ်းညွှန်ညီအကိုမောင်နှများ သို့
>>> > မန္တလေး အခြေစိုက် ဂျပန်ဘာသာစကားပြောဧည့်လမ်းညွှန် ကိုထွဋ်ကျော်၏သား ဖြစ်သူ
>>> > မောင်သန့်ဇင်လင်း(၁၆)နှစ် သည် ဘ၀တပါးပြောင်းသွားပါသဖြင့်
>>> > ကြွင်းကျန်ရစ်သော ရုပ်ကလပ်ကို(၁.၇.၂၀၁၂) ရက်နေ့
>>> > နံနက်(၁၀)နာရီအချိန်တွင်၊အခန်း(၁၇) ၆၈လမ်း၊၃၀X၃၁
>>> > လမ်းကြားနေအိမ်မှကြာနီကန်သုဿန် သို့ ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
>>> > ဧည့်လမ်းညွှန်ညီအကိုမောင်နှမများအနေဖြင့် လိုက်ပါပို့ဆောင်နိုင်ပါရန်
>>> > ကျန်ရစ်သူမိသားသုကိုယ်စားဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
>>> > ပြန်ကြားရေးကော်မတီ
>>> > MTGA( Mandalay )
Re: VOA and guide duty
Thanksalot all friends
On Jun 30, 2012 10:54 PM, "Nyi Nyi ®" <nyinyi@gmail.com> wrote:
Guest pays direct, Ko Nyi. Optionally you can prepay before the entry.
On Sat, Jun 30, 2012 at 2:08 PM, Ko Nyi Nyi <nyi123@gmail.com> wrote:
Guest pay 30 $ visa fee direct at VOA counter (or) guide has to pay before he/ she landed.? pls
On Jun 30, 2012 9:11 AM, "Tun Tun Naing" <ttn229@gmail.com> wrote:
Bro as far as i know,
1) take entrance pass ( near public toilet )
2) enter air port arrival compount
3) privide doc to duty immigitation (1. CV of guest with passport size photo , 2. approval of MHTT 3,pproval of immigation ) pls visa fees 30USD/pax - here as usual must be very very new and clean note & take small note they don't hv change.
4) wait your guest arrival.
2012/6/29 Ko Nyi Nyi <nyi123@gmail.com>
Visa On Arrival ( Tourist Visa ) နှင်.လာသော ဧည်.သည် ကိုသွားကြိုရာတွင်
ဧည်.လမ်းညွှန်မှ လေဆိပ် တွင် လုပ်ဆောင်ရမည်. step များကို share
ပေးစေလိုပါသည် ။ up date လေးတွေသိချင်လို.ပါ ။
Re: ရခိုင်မှတ်တမ်း(၁ - ၈ ) ( ဒေါက်တာသူရိန်လှိုင်ဝင်း ) www.academicmedicines.blogspot.com
Hello! Dr.Thu Rein Hlaing Win,
Thank you very much for sharing your experience to us.
On 6/29/12, chawchaw mirror <chawchawmirror@gmail.com> wrote:
> အခမဲ့ ဆေးဝါးကုသပေးနေကြသော ဒေါက်တာသူရိန်လှိုင်ဝင်း နှင့် ဆရာဝန်အဖွဲ့ အား
> လေးစားစွာ ဂုဏ်ပြုပါသည်။
> ယနေ့ ၂၂.၆.၂၀၁၂ ရက်နေ့နံနက် ၉နာရီခန့်တွင် စစ်တွေမြို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
> ကျနော်တို့ လူငယ်ဆရာဝန် ၁၅ဦးအပြင် အုပ်ချုပ်တဲ့
> ဆရာဝန်တစ်ယောက်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း ဥက္ကဌ၊ GP society
> ဥက္ကဌတို့ပါဝင်ပါတယ်။ စစ်တွေမြို့တွင် အခြေအနေများအတော်လေးကို
> ပြန်လည်တည်ငြိမ်နေပါပြီ။ ဆိုင်တွေလည်း
> ပြန်ဖွင့်နေပါပြီ။မိုးဖွဲဖွဲရွာနေတာကြောင့်လားတောမသိပါဘူး လမ်းသွားလမ်းလာတော့
> ရှင်းနေပါသေးတယ်။ စစ်တွေမှာ curfew လည်း
> ဆက်ထုတ်ထားဆဲပါ။ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ၀င်တွေ့ခဲ့ရပြီး ၀န်ကြီးချုပ်က
> ၂ဖက်လုံးရဲ့အထိမခံနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့် အသေအချာကိုင်တွယ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
> စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ၀န်ထမ်းအင်အားနည်းပါးနေတာကြောင့်အကိုင်အတွယ်နှေးခဲ့ပြီး
> အခုအခါမှာတော့ အတော်လေး
> လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ရှေ့လျှောက်လည်းရေရှည်စီမံကိန်းများနဲ့
> လည်ပတ်နိုင်အောင်အသေးစိတ်အစီစဉ်များဆွဲနေတယ်ဆိုပါတယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာ
> အိမ်ပြန်ဆောက်ပေးနိုင်တဲ့အထိကူညီပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဌာနက
> တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ အခုလောလောဆယ်မှာ
> ရောဂါများကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အများထင်နေသလို ၀မ်းရောဂါတွေ၊
> အသည်းရောင် အသားဝါရောဂါတွေ
> ဒီနေ့မသွားဖြစ်သေးတဲ့အတွက် အသေအချာတော့
> မသိသေးပါဘူး။)ကျန်းမာရေးကူးစက်ရောဂါအဖွဲ့တွေ၊ ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေ၊
> မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအဖွဲ့ဝင်တွေ၊ UN အဖွဲ့တွေ
> ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ ဘင်္ဂလီလူနာများကို တပ်မတော်ဆေးရုံများသို့
> ပို့ဆောင်ကုသပြီး ရခိုင်လူနာများကိုတော့
> အရပ်ဘက်ဆေးရုံများသို့ပို့ဆောင်ကုသတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆေးကုသသွားတဲ့နေရာမှာတော့
> ဘင်္ဂလီဘက်ရော ၂ဖက်လုံးကုသမှုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်မှဒုက္ခသည်စခန်းများကို
> စတင်သွားရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်ကျမှပဲ
> စခန်းများမှ အခြေအနေများကို ဆက်လက်ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်။
> မနေ့ကတော့ curfew ရှိတာကို မေ့နေတဲ့အတွက် စားရေးသောက်ရေးဒုက္ခတွေ့သွားပါတယ်။
> ၂၃.၆.၂၀၁၂ ဒီနေ့ကတော့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို
> စသွားရပြီဖြစ်ပါတယ်။ မနက် ၈နာရီခန့်တွင် ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးမှုရုံးမှာ
> တွေ့ဆုံပြီး တာဝန်ခွဲဝေပါတယ်။ စစ်တွေမြို့မှာ
> ဒုက္ခသည်စခန်းအကြီးအနေနဲ့ ၁၁ခုရှိပါတယ်။ အသေးလေးတွေကတော့အများအပြားရှိပါတယ်။
> ဒုက္ခသည်စခန်း ၁၁ခုမှာ သဲချောင်းနဲ့
> သက်ကယ်ပြင်အရပ်တွေမှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကတော့ဘင်္ဂလီလူမျိုးဒုက္ခသည်တွေကို
> ထားတာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာတော့
> ရခိုင်လူမျိုးတွေကို ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကို
> ထားတဲ့စခန်းက၂ခုပဲရှိတဲ့အတွက် အဲဒီစခန်းတွေမှာတော့ လူတော်တော်များပါတယ်။
> ဆရာဝန် ၁၅ယောက်ကို စခန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ သဲချောင်းနဲ့ သက်ကယ်ပြင်စခန်းတွေကို
> ၃ယောက်စီချပြီး ကျန်တဲ့စခန်း၉ခုကိုတော့
> ၁ယောက်စီတာဝန်ခွဲပေးလိုက်ပါတယ်။ တာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့ထွက်ခွာတဲ့အချိန်မှာတော့
> အတော်လေးကို ခန့်ခန့်ငြားငြားပဲ
> တုတ်တုတ်လို့ခေါ်တဲ့ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များနဲ့သွားရပါတော့တယ်။
> ကျနော်တို့ကိုသွားလာရေးအခက်အခဲမရှိအောင် ကားစီစဉ်ပေးမယ်။
> ကတိပေးတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်စကားကို ယုံမိတဲ့အတွက်
> ထမင်းစားရင်ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်စား၊ ပာိုနားဒီနားနီးရင် လမ်းလျှောက်၊ ဝေးရင်
> တုတ်တုတ်ငှားပြီး သွားရပါတော့တယ်။
> (ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်ဆိုပေမယ့်ဆရာဝန်အသင်းက ကျခံရတာပါ။ ပြည်နယ်အစိုးရကတော့
> ကျနော်တို့ကို ကျွေးဖို့၊
> သွားလာရေးစီစဉ်ပေးဖို့ မေ့နေပုံရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်နော်။)၂၂.၆.၂၀၁၂
> ရက်နေ့ကစပြီးတော့ စစ်တွေမြို့ထဲက ဘင်္ဂလီတွေကို မြို့ပြင်
> ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဆီကို ပို့ဆောင်ထားလိုက်ပါတယ်။
> အဲဒါကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေ၊ မြို့ထဲတွေမှာ လူမျိုးတွေရောနေတာမျိုးမရှိဘဲ
> မြို့ထဲမှာ ဘင်္ဂလီတွေကို မတွေ့ရတော့ပါ။ မြို့ပြင်
> ဒုက္ခသည်စခန်းမှာပဲစုထားလိုက်ပါတယ်။ အဲလိုလုပ်ထားလိုက်လို့လည်း ဆက်ပြီး
> ကျနော်တာဝန်ကျတဲ့နေရာတွေကတော့ရွာမြောက်ကျောင်း ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ ဂြားဘက်
> ဒုက္ခသည်စခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ အ၀င်ဝလမ်းမှာ
> ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် အပြစ်မရှိတဲ့သူတို့လေးတွေ ဒုက္ခရောက်နေရတာကိုတွေ့ရတာ
> အတော်လေးကို စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်။ သောက်သုံးရေ၊
> သုံးရေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတော်လေးကို တိုးတက်နေပေမယ့် အိမ်သာကိစ္စကတော့သိပ်ပြီး
> အားရစရာမကောင်းသေးပါဘူး။ ကလေးတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရတာကတော့
> အများထင်နေသလိုမျိုး ၀မ်းရောဂါတွေ၊
> အသည်းရောင်ရောဂါတွေ အဖြစ်များနေတာမျိုးတော့ မတွေ့ရပါဘူး။အခြားစခန်းတွေမှာလည်း
> ဒီလိုပါပဲ။ ကုသတဲ့နေရာမှာ ဒုက္ခအရောက်ဆုံးကတော့
> ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ စကားဝဲတာကြောင့်ပါ။ သူတို့ပြောနေတာ ဗမာစကားပေမယ့်အရမ်းကို
> ၀ဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘယ်လိုမှကို နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။
> အသေအချာပြောရင်တောင် နားလည်ရခက်နေတော့
> အမြန်ပြောရင်နိုင်ငံခြားသားစကားပြောနေတာကို ထိုင်ကြည့်ရသလိုဖြစ်နေပါတယ်။
> ပြည်သူတွေကို လုံခြုံရေးအတွက် အပြည့်အစုံ
> အာမခံချက်တွေမပေးနိုင်တာတွေကြောင့် အများစုက
> ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာပဲသောင်တင်နေပါတယ်။ UN အဖွဲ့တွေကို
> ပေးမ၀င်နိုင်တာကြောင့်လည်း ဒီလိုမျိုး၊
> နှောင့်နှေးမှုတွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေ ပိုများနေရပါတယ်။ UN
> တွေကိုပေးမ၀င်နိုင်တာကတော့ ပိာုတစ်ခါလိုမျိုး ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေအတွက်
> ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့သူတွေကို ဒုက္ခသည်စခန်းဖွင့်ထားပေးပြီးအသေအချာကုသမှုပေးနေရတာကို
> စိတ်ထဲမှာသိပ်တော့မကျေနပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း
> ရန်သူ၊ မိတ်ဆွေ မခွဲခြားရဘူးဆိုတဲ့
> ကျင့်ဝတ်တွေ၊လူသားချင်းစာနာထောက်ထားပါဆိုတဲ့ အော်သံပာစ်သံတွေကြောင့်
> ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးလျော့ထားပြီး
> ဖြစ်သင့်တာကိုပဲဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးနေရပါတယ်။ ဘင်္ဂလီတွေကို ဘာမှတောင်မလုပ်ရသေးဘဲ
> လူ့အခွင့်ရေး အော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ စစ်တွေမြို့ကို
> လာကြည့်စေချင်ပါတယ်။လူ့အခွင့်ရေးအပြည့်နဲ့ လူသားဆန်စွာကူညီပေးနေပါတယ်။
> ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကို ဆေးဝါးကုသပေးတဲ့အတွက်
> ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကတော့မကျေနပ်ကြပါဘူး။ ကျနော်ကတော့ ကြားထဲက
> ကျနော်တို့ရဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေကို ရခိုင်လူမျိုးတွေ
> နားလည်ပေးနိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းရပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ တော်တော်လေးကို
> ကျနော်ကူညီပေးချင်တဲ့သူတွေကို ကူညီပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် ကျေနပ်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မှပဲ
> အတွေ့အကြုံတွေ ဆက်ပါဦးမယ်။
> ရခိုင်မှတ်တမ်း (၃)
> ၂၄.၆.၂၀၁၂။ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို အကုန်လုံးရောက်ဖြစ်အောင်လှည့်ပြီးသွားရတဲ့
> အစီအစဉ်ကြောင့် ဒီနေ့တော့ ကျနော်
> ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ သဲချောင်းစခန်းနဲ့ သက္ကပြင်စခန်းတွေကိုသွားရပါတယ်။
> ဒီနေ့သွားတော့ ကားကောင်းကောင်းနဲ့သွားရတဲ့
> အတွက် ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ပြည်နယ်အစိုးရကို မဆိုးပါဘူး၊
> ကားစီစဉ်ပေးသားပဲဆိုပြီးအမှတ်ပေးပြီး မနေ့က ရေးထားတာတွေကိုတောင်
> လမ်းတစ်ဝက်ရောက်တော့မှကားပေါ်မှာလိုက်လာတဲ့ ဆရာကြီးတွေ ကားခစစ်နေတာတွေ့ရတော့မှာ
> သောက်တလွဲအစိုးရပဲဆိုပြီး အမှတ်တွေထပ်နှုတ်လိုက်ပါတယ်။
> နောက်နေ့တွေလည်းဆရာဝန်အသင်းက စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ပဲ ဆေးကုထွက်ရဦးမှာပါ။
> လာကူညီတာကို ဘာမှ မစီစဉ်ပေးတဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရကိုလည်း အတော်လေးကိုအံသြပါတယ်။
> စစ်တွေမြို့ပြင်ကို ထွက်လိုက်ပြီး စစ်တပ်ဂိတ်ကို ကျော်တာနဲ့
> မျက်စိမှိတ်ပြီး လက်ညှိုးထိုးလိုက် ထိုးမလွဲ ဘင်္ဂလီတွေရှိပါတယ်။ဒီလောက်များတဲ့
> ဘင်္ဂလီတွေဘယ်လိုမျိုးများ ရောက်နေတာလဲဆိုတာကို ကျနော်
> တော်တော်လေး အံသြမိပါတယ်။ ၅၀-၅၀ ရှိတယ်ဆိုတဲ့
> စစ်တွေမှာတောင်ဒီလောက်များနေတယ်ဆိုရင် ဘူးသီးတောင် မောင်းတောမြို့တွေလို
> ၁၀-၉၀လောက်ရှိနေတဲ့ နေရာတွေဆိုရင် ဘယ်လိုများနေမလဲ
> မသိဘူးဗျာ။စစ်တွေဒုက္ခသည်စခန်းသွားရာ လမ်းတလျှောက်ကို စစ်တပ်က ထိန်းချုပ်ထားပြီး
> လမ်းတလျှောက်မှာ စစ်တပ်ကင်းတွေ အများအပြားကို
> တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။စစ်တွေမြို့ပြင်ကိုထွက်တာနဲ့ မီဒီယာတွေ၊ INGO
> တွေကိုသွားခွင့်မပြုတော့ပါဘူး။ အခြေအနေက
> တည်ငြိမ်နေပေမယ့်လုံခြုံရေးအတွက်တပ်သား၂ယောက်ကို လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့
> ဒုက္ခသည်စခန်းမှာတော့ မိသားစုလိုက်နေလို့ရတဲ့
> တဲဖြူဖြူတွေအများကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်။ တဲဖြူဖြူတွေရဲ့ တံဆိပ်မှာတော့
> ရိုက်နှိပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်(သူတို့ဘာသာတူခြင်းတော့ အရမ်းရိုင်းပင်းတယ်နော်။
> အတုယူသင့်ပါတယ်။) သူတို့
> ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကတော့ အတော်လေးကို လူများပါတယ်။
> ရခိုင်လူမျိုးဒုက္ခသည်တွေကစစ်တွေမြို့ထဲမှာ အဆင်ပြေတဲ့ နေရာမှာ
> ဒုက္ခသည်စခန်းဖွင့်ပြီး နေလို့ရလို့
> စခန်းတစ်ခုမှာ လူနာသောင်းချီနေတာမျိုးမရှိပေမယ့်
> ဘင်္ဂလီစခန်းကတော့၂ခုပဲရှိတဲ့အတွက် လူဦးရေ သောင်းချီပြီးရှိပါတယ်။
> ဒုက္ခသည်စခန်းရှိတဲ့နေရာမှာ စစ်တပ်က
> တပ်ရင်းတစ်ခုချထားပါတယ်။သူတို့စခန်းတွေကတော့ နဂိုတည်းကလည်း
> လူမျိုးတွေဆိုတော့ အတော်လေးကို ညစ်ပတ်စုတ်ပြတ်နေပါတယ်။
> အဲလိုဆိုတော့ကူးစက်ရောဂါတွေလည်း ဖြစ်ဖို့ ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းများနေပါတယ်။
> အခုချိန်ထိတော့ အသေအချာကိုင်တွယ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောဂါကြီးကြီးမားမား
> (၀မ်းရောဂါ၊ အသည်းရောင်ရောဂါ) တွေဖြစ်တာတော့
> မတွေ့သေးပါဘူး။ သွားတုန်းကတော့ ဒီကောင်တွေကို
> ငါမကုပေးချင်ဘူးလိုစိတ်ကူးမိပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အခြေအနေတွေကို တွေ့ရတော့လည်း
> လူသားချင်းစာနာထောက်ထားပြီး အသေအချာကုပေးမိပါတယ်။ စိတ်သက်သာရာရတာကကျနော်တို့
> ရခိုင်လူမျိုးတွေက သူတို့ထက်တော့
> အများကြီးသာတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ ဆေးရုံနဲ့နီးတယ်၊
> အလှူရှင်တွေရဲ့အထောက်အပံ့တွေရနိုင်တယ်၊ ဆေးပစ္စည်းလုံလုံလောက်လောက်နဲ့
> ဆရာဝန်တွေအများကြီးနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးပါတယ်။ဘင်္ဂလီတွေဘက်ကတော့
> အကူအညီတွေမရလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ INGO တွေကို ပေးမ၀င်ဘဲ
> အစိုးရကသာ အားလုံးကို အသေအချာထိန်းချုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့လည်းကုရတာက
> သူတို့လူမျိုးအများကြီးကြားထဲမှာ ထိုင်ပြီးကုသရတာဆိုတော့
> နည်းနည်းတော့ မျက်ခုံးလှုပ်ရပါတယ်။ တစ်ခုခုများဖြစ်ခဲ့ရင် ဘဲအုပ်ကတစ်ထောင်
> နှစ်ထောင် မဗေဒါက တစ်ပင်တည်းဖြစ်မယ့် အပေါက်ပါ။
> တပ်သား၂ယောက်ပေးလိုက်ပေမယ့် အပြင်မှာစောင့်နေကြတာပါ။
> ကျနော်တို့နဲ့နီးနီးနားနားကတော့ အရန်မီးသတ်တွေပါ။ အစတုန်းကတော့ အနားမှာ
> အရန်မီးသတ်တွေထားပေးမယ်ဆိုတော့ မဆိုးဘူးထင်နေတာ ပာိုရောက်တော့ကြည့်လိုက်တော့
> အရန်မီးသတ်တွေဆိုတာကလည်း သူတို့လူမျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်။
> သူတို့လူမျိုးတွေထားပေးထားတာက စကားပြန်လုပ်ဖို့ပါ။
> ကျနော်ကြည့်ခဲ့တဲ့လူနာအတော်များများက ဗမာစကားကို မပြောတတ်ပါဘူး။
> တစ်လုံးတစ်လေလောက်ပဲတတ်တာပါ။ ဗမာစကားမတတ်ဘဲ
> ဒီနေရာထိအောင်ကိုဘယ်လိုများရောက်ခဲ့လဲလို့ ထပ်ပြီး အံသြရပါတယ်။
> ပာုတ်တာတွေရောမပာုတ်တာတွေပါ ပြောကြပါတယ်။ ရခိုင်တွေကပဲ
> သူတို့အိမ်တွေကိုမီးရှို့တဲ့အကြောင်း၊ သူတို့ ဒုက္ခရောက်ရတဲ့အကြောင်းတွေကို
> ငိုသံတွေနဲ့ပြောကြပြန်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း သူတို့အထဲမှာဆိုတော့ဘာမှချိုသည်၊
> ခါးသည်ပြောခွင့်မကြုံခဲ့ပါဘူး (ကြောက်ရတယ်လေ၊
> တော်ကြာကိုယ့်လုပ်သွားမှ ကိုယ်အရင်ခံရမှာအရင်၊ စစ်တပ်က
> ပစ်တာကနောက်မှလေ။)သူတို့ကိုလည်း မကုပေးလို့တော့မရပါဘူး။ ကျနော်တို့မှ
> ကုပေးမယ့်လူလုံးဝမရှိပါဘူး။ အဲဒီတော့လည်း လူသားချင်းစာနာပြီးကုသပေးရပါတယ်။
> ကျနော်တို့နဲ့အတူပါလာတဲ့ တပ်သားတွေကိုမေးကြည့်တာတော့
> သူတို့ဆီကို ပစ်မိန့်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကနောက်ကျတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ကတော့
> ပစ်မိန့်ရတာနဲ့ ပထမတော့ အောက်ခြေတွေကိုပဲပစ်ပြီး
> နောက်ပိုင်းဆက်တက်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ လူတွေကိုပဲချိန်ပြီးပစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
> သေနတ်မှန်ပြီးလူထိသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော့ သူတို့တွေဘက်က
> ကျနော်တို့နဲ့ ပါလာတဲ့တပ်သားကြီးတွေကတော့ သူတို့ကို ဘယ်သူမှ
> လက်မခံရင်ပင်လယ်ထဲသာမောင်းချလိုက်တာအကောင်းဆုံးလို့ ပြောနေကြပါတယ်။ အဲတော့
> မပစ်ဘဲမနေပါဘူး။ ရေရှည်မှာ
> ဒီလောက်များတဲ့သူတွေကို ဘယ်လိုများစီစဉ်မလဲဆိုတာကိုတော့
> အခုထိကျနော်လည်းစဉ်းစားလို့မရသေးပါဘူး။ လူကြီးပိုင်းတွေတော့
> ဘယ်လိုများလုပ်ကြမလဲမသိပါဘူး။ သူတို့နဲ့ ရခိုင်လူမျိုးများကိုပူးတွဲပြီးတော့
> ဘယ်လိုမှနေထိုင်လို့ မရနိုင်ပါ။
> ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့လည်း သူတို့ရှိနေသမျှ
> လုံခြုံမှုကိုမခံစားနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်နေရပ်ကို မပြန်ရဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
> အဲလိုကိုယ့်နေရပ်ကို မပြန်နိုင်ဘဲ
> စခန်းမှာသောင်တင်နေလေ၊ကူးစက်ရောဂါတွေဖြစ်ဖို့ကတော့ ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းများလာလေ
> အခုတော့စစ်တွေမြို့ထဲကို ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေမ၀င်ရဘူးဆိုပြီး
> လုပ်ထားပါတယ်။စစ်တွေမြို့ထဲက ဗလီတွေကိုလည်း ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
> ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာတော့ ကျနော်တို့ကို ရန်မူမယ့်
> အရိပ်အယောင်တွေတော့မတွေ့ရပါဘူး။ ကျနော်တို့မှမကုရင်လည်း
> ဒါပေမယ့်လည်းပြောလို့တော့မရဘူးဗျာ။ သူတို့တွေသာထလုပ်လိုက်ရင်လည်း
> အရင်ဆုံးသွားရမှာပဲ (သေရွာကိုပြောပါတယ်)။ မျက်ခုံးခပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ပဲဆက်ပြီး
> ဆေးခန်းထိုင်ပြီး ဆက်လက်ကုသပေးနေရဦးမှာပါပဲ။ ဒါပာာ
> ကျနော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတတ်တဲ့ဓလေ့တစ်ခုပဲပေါ့ဗျာ။
> ကုလားတွေကို ကုပေးနေတယ်ဆိုပြီး ကျနော်တို့ကိုတော့
> ၂၅.၆.၂၀၁၂။ ။ အရင်နေ့တွေကုသခဲ့တာတ်ာတော်များတော့ဒီနေ့တော့စစ်တွေမြို့ထဲမှာ
> လူနာလျော့နည်းသွားပါတယ်။ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ
> အိမ်မီးမလောင်ဘဲ ကြောက်လို့လာခိုလှုံနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေကတော့စစ်တွေမြို့ထဲမှာ
> ဘင်္ဂလီတွေလည်း မရှိတော့ဘူးဆိုတော့
> အိမ်တွေကိုပြန်တဲ့သူပြန်နေကြပါပြီ။ ကျနော်တို့
> ဒီနေ့တော့ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို မသွားလိုက်ရပါဘူး။ အရင်နေ့တွေတုန်းကတော့
> ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းကပဲ သွားစရိတ်၊ စားစရိတ်နဲ့လုံခြုံရေးအတွက်
> တပ်သား၂ယောက်ကိုမုန့်ဖိုးပေးပြီး ခေါ်သွားရပါတယ်။
> အရမ်းထိန်းချုပ်ထားပြီးအကူအညီတွေနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘင်္ဂလီတွေဘက်ကလည်း
> ဗုံးတစ်လုံးလိုဖြစ်နေတာပါ။ ကျနော်တို့ကို
> သတ္တိမရှိတဲ့လူတွေလို့လည်းထင်ရင်လည်းထင်ပါတော့။ ကျနော်တို့နေရာကနေပြီးတော့
> ဒီိလိုလုပ်ဖို့ဝန်မလေးနိုင်ပါဘူး။ မောင်းတောမှာမှတစ်ယောက်ချင်းသတ်သွားတာပါ။
> လူတစ်သောင်းနှစ်သောင်းကြားထဲမှာ ကုနေရတာပါ။
> လက်နက်ကိုင်၂ယောက်ကလည်းတကယ်တမ်းဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုများခံနိုင်မှာလဲ။ ဒါတောင်
> ကျနော်တို့တောင်းဆိုတာက ဒီလက်နက်ကိုင်လေး၂ယောက်တည်းပါ။ကျနော်တို့အများကြီးကို
> risk ယူပြီးသွားနေရတာပါ။ အဲဒါကိုပဲ ကျနော်တို့ကို
> လက်နက်ကိုင်မထောက်ပံ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ လမ်းမှာစစ်တပ်ချထားတာမှန်ပါတယ်။စစ်တပ်က
> စခန်းမှာရှိတယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း
> တကယ်သာအရေးအကြောင်းဆိုရင် ကျနော်တို့ကအရင်ဆုံးပါ။စစ်တပ်နဲ့နီးတယ်ဆိုတာကလည်း
> သဲချောင်းစခန်းသာနီးနေပေမယ့် သက္ကပြင်အရပ်ကတော့
> ဝေးပါတယ်။ စစ်တပ်ဆီကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်
> ကျနော်တို့ကကုလား၃သောင်းလောက်ကိုအရင်ဖြတ်ပြီးမှ ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့
> ဒီရောက်ကတည်းက ကျနော်တို့ကိုလုပ်ပေးတာဆိုလို့ နေစရာစီစဉ်ပေးတာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။
> လိုက်လုပ်ပေးနေရတာပါ။ ကျနော်တို့ဘာမှ မတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူး။ကျနော်တို့အဖွဲ့ရဲ့
> စရိတ်ကတစ်နေ့ကို ဘာမှအပိုမသုံးဘဲတောင်
> ၁၅၀၀၀၀လောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီကုန်ကျစရိတ်ကို
> ဆရာဝန်အသင်းကစရိတ်စိုက်ထုတ်ကျခံနေတာပါ။ အဲလောက်လုပ်ပေးနေတာတောင်မှ ကျနော်တို့
> ယူပေးနေတာကို မငဲ့ဘဲ
> ကျနော်တို့အုပ်စုထဲမှာလည်း အတော်လေးကို
> စိတ်ပျက်စရာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ဆရာဝန်အသင်းဆိုတာပာာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းမပာုတ်ပါဘူး။
> ကျနော်တို့အနေနဲ့လည်းအစိုးရရဲ့အကူအညီမရဘဲ ရေရှည်အကူအညီပေးနိုင်ဖို့က
> ဘယ်လိုပဲအခက်အခဲတွေရှိနေပေမယ့်လည်း ကျနော်တို့
> ကျနော်တို့ ဘင်္ဂလီတွေကိုဒီလိုမျိုး ကုသပေးနေတယ်ဆိုတာကလည်း သူတို့တွေကိုအရမ်းကို
> သနားပြီးကူညီချင်နေလွန်းလို့မပာုတ်ပါဘူး။ လူ့အခွင့်ရေးအော်ပြီး
> ကျနော်တို့နိုင်ငံကို သိက္ခာချချင်နေတဲ့သူတွေ
> ဘာမှမပြောနိုင်အောင်လူသားချင်းစာနာတဲ့ အကူအညီတွေပေးနေတာပါ။ တနည်းပြောရရင်
> ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ Imageကိုမထိခိုက်ဘဲ သူတို့ပြသာနာကိုဖြေရှင်းနိုင်အောင်
> ကျနော်လည်း ကျနော့်မှတ်တမ်းထဲမှာ
> အားလုံးပဲနားလည်ပေးကြပါ။ ကျနော်တို့လည်း
> ပထမတော့၂ပတ်နေပြီးအကူအညီပေးဖို့စီစဉ်ထားပေမယ့် ပြည်နည်အစိုးရရဲ့အကူအညီ၊
> ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ အကူအညီတွေမရတဲ့အတွက်ရေရှည်မလုပ်နိုင်လောက်တော့ပါဘူး။
> ၂၆.၆.၂၀၁၂။ ။မနေ့က ကျနော်တို့ သဲချောင်း၊ သက္ကပြင်အရပ်တွေကိုမသွားဖြစ်လို့
> ပြည်နယ်အစိုးရကို လုံခြုံရေးထပ်တောင်းကြည့်ပါတယ်။
> ပာိုဘက်မှာက ကျနော်တို့မသွားရင် သွားကုတဲ့ဆရာဝန်မရှိပါ။ဒါပေမယ့်ဒီနေ့လည်း
> ကျနော်တို့ကို လုံခြုံရေးမပေးနိုင်ပါလို့
> အကြောင်းပြန်ပါတယ်။ အဲဒီအခါဆရာကြီးများက ကျနော်တို့ရဲ့သဘောထားကိုမေးပါတယ်။
> နောက်ဆုံးမှာ ကျနော်တို့ အသေအချာဆွေးနွေးပြီး
> သဲချောင်းကိုကျနော်တို့လက်နက်ကိုင်မခေါ်ဘဲသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
> ထို့နောက်တာဝန်ခွဲဝေပြီး သဲချောင်းကို
> ဆရာဝန်စုစုပေါင်း၅ယောက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဒီနေ့အဖို့
> ပညာအောင်မြေဒုက္ခသည်စခန်းကို တာဝန်ကျပါတယ်။
> ပညာအောင်မြေဒုက္ခသည်စခန်းကဒုက္ခသည်အများစုကတော့ မီးရှို့ခံရတဲ့
> ဒုက္ခသည်အများစုက ကုန်းတန်းရပ်ကွက်ကပါ။
> အိမ်တော်တော်များများက မီးရှို့ခံထားရပါတယ်။ ဘင်္ဂလီတွေကဓါတ်ဆီပုလင်းတွေမှာ
> မီးစာထည့်ပြီး အိမ်တွေထဲကို
> လိုက်ပစ်ထည့်တာလို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့
> ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကတစ်နေရာကိုလိုက်ရင် သူတို့က နောက်တစ်နေရာကိုပြေးပြီး
> အဲလိုမျိုးနဲ့ လိုက်လို့မမှီဖြစ်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။
> နောက်တစ်နည်းကသူတို့ဘင်္ဂလီတွေကိုယ်တိုင်နေတဲ့အိမ်တွေကို မီးရှို့သွားတာပါ။
> သူတို့နေတဲ့အိမ်တွေကတော့ တဲလေးတွေဆိုတော့ အဆုံးရှုံးခံပြီးရခိုင်အိမ်တွေကို
> လောင်အောင်လုပ်တာပါ။ အခုတော့ ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ
> ညဘက်ကင်းအဖွဲ့ထားပြီး ရပ်ကွက်ထဲက ယောက်ျားသားတွေ
> တလှည့်စီကင်းစောင့်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အ်ိမ်တွေပြန် မဆောက်ပေးနိုင်သေးဘဲ
> အဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် အိမ်ထောင်စုတွေအတော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ပါတယ်။
> ခိုလှုံစရာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေရှိနေသေးတာပဲ
> ပညာအောင်မြေကျောင်းမှာတော့ခိုလှုံနေတဲ့သူသိပ်မများပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း
> အိမ်ခြေမဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့အတွက်အိမ်မြန်မြန်ပြန်ဆောက်ပေးလိုက်ရင်တော့
> ခိုလှုံနေရတဲ့ဒုက္ခကကင်းဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလည်း
> ဒုက္ခသည်ဦးရေလျော့လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တွေမြို့မှာ
> သတင်းတွေကတော့အမျိုးမျိုးကြားရပေမယ့် အများစုကတော့ ကောလပာာလတွေဖြစ်နေပါတယ်။
> တချို့နေရာတွေမှာတော့ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေရှိနေသေးပါတယ်။ ပ်ိတ်မိနေတာလားတော့မသိပါ။
> ကျနော်သွားတဲ့လမ်းတစ်လျောက်မှာလည်း အချို့ရပ်ကွက်တွေကို သံဆူးကြိုးတားထားပြီး
> အထဲမှာဘင်္ဂလီလူမျိုးတချို့ကို တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ကိုလည်း သဲချောင်းနဲ့
> ကျောင်းတွေလည်း ပြန်ဖွင့်နေပါပြီ ဒါပေမယ့်လည်း
> ကျောင်းသားတွေကတော့ပြန်မတက်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလည်း
> တပ်ချထားလို့သာဘာမှမဖြစ်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီအခြေအနေကို
> မရှင်းလင်းသေးဘဲတပ်ကိုပြန်ရုပ်သွားရင်တော့ မလွဲမသွေထပ်ပြီးပြဿနာဖြစ်မှာပါ။
> လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊ စာပေစကားဘယ်လိုမှမတူတဲ့
> ဆန့်ကျင်ဘက် နှစ်ဘက်ကို
> အဲလိုမျိုးလုပ်ပြီး နိုင်ငံသားလက်မှတ်မရှိတဲ့သူတွေ၊
> သန်းခေါင်စာရင်းမရှိတဲ့သူတွေကို နေထိုင်ခွင့်မထုတ်ပေးဘဲ
> ထွက်ခွာစေသင့်ပါတယ်။မောင်းတောကလာတဲ့ သူနာပြုအမရဲ့စကားအရတော့ မောင်းတောမှာ
> ဘင်္ဂလီအများအပြားကိုစစ်တပ်က ဖမ်းပြီးထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့တော့
> မြို့တွင်းလည်းဖြစ်ပြန်၊ လူနာကလည်း
> သိပ်မများတဲ့အတွက်ကြောင့်မပင်မပန်းသက်တောင့်သက်သာပဲ ကုသပေးပြီး
> ၂၇.၆.၂၀၁၂။ ။ ဒီနေ့မှာ ကြက်ခြေနီအကြီးအကဲကို
> ကျနော်မနေ့ကသတင်းအကြောင်းမေးမြန်းကြည့်ပါတယ်။ သူပြန်ပြောတာကတော့
> ပြန်သိမ်းလိုက်တာမှန်ကန်ပေမယ့် သတင်းတွေကြားနေသလိုတော့မပာုတ်ဘဲ
> အထက်ကပြန်ရုပ်သိမ်းရန်အမိန့်ထုတ်တာကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီတော့
> မနေ့ကကျနော်တင်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းကို ကောလပာာလတစ်ခုအဖြစ်ပဲ
> ယူဆလိုက်ပါ။အခုတလောစစ်တွေမှာအတော်လေးကို မိုးကောင်းနေပါတယ်။
> မိုးရွာတိုင်းလည်း ရေအတော်ပါပါတယ်။ကျနော်တို့တည်းတဲ့ဆေးရုံဝန်းကျင်မှာတောင်
> ရေတွေပြည့်လျှံနေပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေအတွက်တော့ ပိုပြီး ဆိုးလောက်ပါတယ်။
> တွေးမိပါသေးတယ်။မနက်ပိုင်းအစည်းအဝေးမှာ Regional health officer
> ဘူးသီးတောင်ဘက်မှာ ရေကြီးနေတဲ့အကြောင်း၊ဒူးဆစ်လောက်ထိမြုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
> ဘူးသီးတောင်ဆေးရုံထဲကိုရေတွေဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် လူနာတွေကို
> ရွေ့ပြောင်းထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆေးရုံပစ္စည်းတွေထဲက မီးစက်၊
> ဒီထက်နောက်တစ်ပေလောက်ဆက်တက်ရင် ဓါတ်မှန်စက်ပျက်စီးနိုင်တယ်လို့
> ဆိုပါတယ်။ဘူးသီးတောင်အတွက်တော့ အတော်လေးကို စိတ်မကောင်းစရာကောင်းပါတယ်။
> ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုကြုံပြီးလို့ မပြီးသေးခင်မှာဘဲ နောက်ထပ်
> သဘာဝဘေးတစ်ခုနဲ့ထပ်ကြုံရပြန်ပါတယ်။ ဘူးသီးတောင်က ပြည်သူတွေအတွက်
> မနက်ပိုင်းတာဝန်ခွဲဝေအပြီးမှာ ကျနော်က
> ဘင်္ဂလီစခန်းဖြစ်တဲ့သဲချောင်းကိုတာဝန်ပြန်ကျပါတယ်။ ကျနော်တို့အသင်းမှ ဆရာဝန်
> ၅ဦး၊ တိုင်းရင်းဆေးဆရာ၃ဦး၊
> ကြက်ခြေနီ၎ဦးနဲ့အတူ သဲချောင်းစခန်းကို
> စောစောထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။သဲချောင်းစခန်းကို မနက် ၉နာရီခန့်မှာရောက်ပြီး
> ထုံးစံအတိုင်းပဲ သဲချောင်းစခန်းကတော့
> အတော်လေးကိုလူနာများပါတယ်။ယာယီဆေးရုံဆောက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် အရင်ထက်တော့
> အဆင်ပြေလာပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့
> ဗိုလ်မှူးရဲ့ကောင်းမှုပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပထမတော့
> အပြင်မှာပဲလူနာတွေကစောင့်ပြီး စည်းကမ်းတကျဝင်နေကြပေမယ့်
> နောက်ပိုင်းမှာတော့ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ
> တစ်ခုသတိပြုမိတာကတော့ ဆေးခန်းလာပြတဲ့လူနာအများစုပာာ
> အမျိုးသမီးတွေ၊ကလေးသူငယ်တွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေများပါတယ်။
> အသည်းအသန်ဖြစ်နေမှသာလာပြတတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့
> စဉ်းစားဥာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ကလေးငယ်တွေ၊
> သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေထိခိုက်ရပါတယ်။ စားစရာ၊ သောက်စရာ၊
> နေထိုင်ရပါတယ်။ လာပြတဲ့လူနာတွေထဲမှာ
> ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံတွေ၊
> ပိုဆိုးဖို့ပဲရှိပါတယ်။ကျန်တာကတော့ ဖျားနာတာတွေပဲများပါတယ်။
> ၀မ်းရောဂါလူနာတွေကို ကျနော်တို့ဘက်က
> ဓါတ်ဆားထုပ်များပေးပါတယ်။ အဲဒီဓါတ်ဆားထုတ်တွေကို
> သူတို့ကအားရှိတယ်ဆိုပြီးအပြင်မှာ တစ်ထုပ်၅၀၀လောက်ထိဈေးပေါက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
> ဓါတ်ဆားထုတ်တောင်းတဲ့သူတွေလည်း ပါနေတတ်ပါတယ်။
> ကျနော်တို့မှာလည်းတဲထဲမှာလူတွေက၀ိုင်းအုံပြီး ၀ိုင်းပြနေတာဆိုတော့
> ၀မ်းလျှောတယ်ဆိုရင် ဓါတ်ဆားရည်ပေးလိုက်ရတာများပါတယ်။လူတွေဝိုင်းအုံနေတော့
> ကျနော်တို့အဖြစ်ကိုမကြည့်ရက်လို့နဲ့တူပါတယ်။ အပြင်မှာစောင့်နေတဲ့
> စနစ်တကျဖြစ်အောင်မောင်းပါတော့တယ်။အဲဒီတော့မှပဲ ကျနော်တို့လည်း
> အသက်၀၀ရှူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း
> စစ်သားတွေလစ်တာနဲ့ သူတို့ကတော့
> ကြိမ်းမောင်းသံတွေ၊ ကလေးငိုသံတွေ၊
> စစ်သားတွေရဲ့ ကြိမ်းမောင်းသံတွေ၊ နံရံတွေကို
> တုတ်နဲ့ရိုက်သံတွေကိုကြားရတာလန့်တောင်လန့်ပါတယ်။ သူတို့လုပ်ပုံနဲ့ငါတို့ပါ
> သေကုန်တော့မှာပဲလို့တောင်တွေးမိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းကျနော်တို့စစ်သားတွေ
> စစ်သားတွေအတော်လေးကို စည်းကမ်းရှိနေသလို အတော်လေးလည်း
> ကူညီပေးပါတယ်။သူတို့သာမကူညီရင် ကျနော်တို့ အသက်ရှူလို့မ၀ဘဲတောင် သေနိုင်ပါတယ်။
> ကျနော်တို့အနားမှာ စကားပြန်တစ်ယောက်လည်း
> အတော်လေးကိုပြောရဆိုရခက်ပါတယ်။ ကုသတဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့ဆရာဝန်
> ၄ယောက်ကကုတင်၃ခုနဲ့ကုပါတယ်။ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့က ကုတင်တစ်ခုနဲ့
> ဒဏ်ရာရလူနာတွေကိုဆေးထည့်၊ ပတ်တီးစည်းတာတွေလုပ်ပေးပါတယ်။
> သူတို့ဘက်မှာလည်းဖြစ်သွားတဲ့အရေးအခင်းမှာ ထိခိုက်မှုတွေများပါတယ်။
> ကြက်ခြေနီတွေတောင် လက်မလည်ဖြစ်နေပါတယ်။
> ကျနော်တို့သဲချောင်းမှာမနက်၉နာရီကနေပြီးဆက်တိုက်ကုတာ ညနေ၃နာရီထိရောက်ပါတယ်။
> ကျနော်တို့လည်း ရပ်နားလိုက်ရပါတယ်။
> အကြာကြီးစောင့်ပြီး မကုလိုက်ရတဲ့သူတွေအများအပြားကျန်ခဲ့ပါသေးတယ်။
> မနေ့ကညကရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအသတ်ခံထားရတဲ့ခွေကို ကြည့်ထားတဲ့အတွက်
> အမှန်အတိုင်းပြောရရင် သူတို့ကို ကုပေးချင်စိတ်တောင်မရှိပါဘူး။ဒါပေမယ့်လည်း
> တာဝန်ပေးထားတဲ့အတွက်သွားရတဲ့အခါမှာ သူတို့အခြေအနေတွေကို
> တွေ့နေရတော့လည်း ကုသပေးပါတယ်။ ဒါတောင်
> ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ဆေး၊ဈေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဆေးတွေကိုပဲ ရွေးပေးမိပါတယ်။)
> နောက်ပိုင်းတော့လည်း အဲဒီစိတ်တွေကို
> ပြန်ဖျောက်ပြီးဆရာဝန်စိတ်ဓါတ်အပြည့်ပြန်သွင်းပြီး ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။ သဲချောင်းကနေ
> ညနေ၃နာရီကျော်မှပြန်ခဲ့ပြီး ၄နာရီမှပဲမနက်စာထမင်းစားရပါတယ်။
> ဒါတောာင်ပြည်နယ်ရုံးက ကျနော်တို့ကို ဒီနေ့လူကြီးတွေလာမှာမို့လို့
> ပြလို့ကောင်းအောင်ဆိုပြီး စောင့်စေချင်ပါသေးတယ်။
> ကျနော်တို့ကတော့မစောင့်တော့ဘဲပြန်လာပါတယ်။ ကျနော်တို့ မှန်တာလုပ်နေတာ
> ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။စစ်တွေမြို့ကနေထွက်ပြီး သံလမ်းကိုကျော်တာနဲ့
> ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကိုသာလမ်းတစ်လျှောက်ရော၊စခန်းမှာပါမြင်တွေ့ရပါတယ်။ စကားလည်း
> ပြောမရ၊ သူတို့ပြောတာလည်း နားမလည်နဲ့
> ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာပဲ သူများတိုင်းပြည်ရောက်နေသလိုခံစားရပါတယ်။သဲချောင်းကတော့
> လုံခြုံရေးတော်တော်ကောင်းနေပါပြီ။ သက္ကပြင်အရပ်ကတော့
> ကျနော်တို့မသွားနိုင်ပါဘူး။ပြည်နယ်အစိုးရကလည်း လုံခြုံရေးတခါတည်းထည့်ပေးဖို့
> မသွားဖြစ်တာပါ။စစ်တွေမြို့ထဲမှာတော့ ဘင်္ဂလီရပ်ကွက် ၂ခု၊ လူဦးရေ
> ထောင်ဂဏန်းနဲ့ချီပြီးကျန်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့ရပ်ကွက်တွေကိုတော့
> လမ်းပေါ်မှာမတွေ့ရဘဲအ်ိမ်တံခါးတွေကိုပိတ်ထားတာပဲတွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ကိုလည်း
> အနောက်စံပြကိုသွားတဲ့အဖွဲ့ပါ။ အနောက်စံပြကလည်း
> ဘင်္ဂလီစခန်းတစ်ခုပါပဲ။အဲဒီမှာသွားကုနေတုန်း အမွှာပူးကိုယ်ဝန်သည်က
> ကလေးစမွေးပါတယ်။ ပထမကလေးကို
> မွေးလိုက်ရတာမခက်ပေမယ့် ဒုတိယတစ်ယောက်မှာတော့
> ကလေးကကန့်လန့်ဖြတ်ခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပစ္စည်းကိရိယာဘယ်လိုမှမစုံလင်တဲ့အတွက်
> ပထမကလေးမွေးပြီး ချက်ကြိုးကို သွေးမထွက်အောင်
> ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ။
> ကျနော်တို့ရဲ့ ကုသရေးခရီးစဉ်ကို ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကြောင့် ၃၀.၆.၂၀၁၂
> (စနေနေ့)မှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်စေတနာ့ဝန်ထမ်းနောက်တစ်ဖွဲ့လည်း
> ထပ်လွှတ်နိုင်တော့မယ်မထင်ပါ။ ကျနော်တို့အသင်းလည်း
> နိုင်သလောက်၊အားရှိသလောက်ဝင်ကူပေးပြီးပါပြီ။ အမှန်တော့ ပြည်နယ်အစိုးရကသာ
> ကျနော်တို့ကလုပ်အားစိုက်ထုတ်ပြီးဒီထက်ကြာကြာကူညီပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း
> ကျနော်တို့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေအရ
> မနေ့က မသေချာသေးတဲ့သတင်းကို တင်ပေးလိုက်မိတဲ့အတွက်အများကြီးတောင်းပန်ပါတယ်။
> နောက်နေ့တွေမှပဲ အတွေ့အကြုံတွေဆက်တင်ပေးပါမယ်။
> ၂၈.၆.၂၀၁၂။ ။ မနေ့ထဲကလာမယ်လို့ဆိုတဲ့ လူကြီးတွေကဒီနေ့မှပဲလာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
> တာမသေချာတဲ့အတွက် စောင့်ရပါတယ်။
> စောင့်ရင်းစောင့်ရင်းနဲ့နေ့လည်ထမင်းစားချိန်ရောက်သွားလို့ ထမင်းစားပြီးမှပဲ
> ကိုယ်တာဝန်ကျတဲ့နေရာကိုသွားရပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ ကျနော်မြို့ထဲကိတာဝန်ကျပါတယ်။
> ဒုက္ခသည်စခန်းမှာပါ။ ရွှေစေတီကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဓည၀တီကိုဖြတ်သန်းသွားရပါတယ်။
> လမ်းကတော့ ကြမ်းလွန်းလို့
> ကျောက်ခဲစားသွားရင်တောင် အစာကျေလောက်ပါတယ်။
> ဓည၀တီဆိုတာကတော့မီးအကြီးအကျယ်ရှို့ခံထားရတဲ့ ရပ်ကွက်တစ်ခုပါ။
> လမ်းဘေးဝဲယာတစ်လျောက်မှာ မီးလောင်ခံထားရပြီး
> ကြည့်ရတာ အတော်လေးကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ဗျာ။
> ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ကံကောင်းထောက်မစွာ မီးလောင်ခြင်းမခံထားရတဲ့အိမ်တွေရဲ့
> ရခိုင်အိမ် ဆိုတဲ့စာတွေကိုရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
> ဘင်္ဂလီတွေကပဲရှို့ဖို့အတွက်အမှတ်အသားပြုထားတာလား၊ ဒါမှမပာုတ် ရခိုင်တွေကပဲ
> အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုတိုးတက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါတွေ၊
> အများအားဖြင့်လာပြကြတာကတော့သာမန်ဖျားနာတာတွေလောက်ပါပဲ။ အခုအချိန်မှာတော့
> တစ်ခုပဲစိုးရိမ်မိတာက ဘင်္ဂလီတွေပာာ
> တဖြည်းဖြည်းနဲ့သေမထူး၊ နေမထူးဖြစ်လာပါပြီ။
> စားနပ်ရိက္ခာတွေ၊ဆေးဝါးတွေပြတ်လတ်နေပြီး မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်
> ခက်နေပါတယ်။ အဲဒီအတွက်သေမထူးနေမထူး
> ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီးလုပ်ကုန်မှာစိုးရပါတယ်။ ဆေးကုသနေရင်း
> ထုံးစံအတိုင်းပဲသုတ်သုတ်လာသုတ်သုတ်ပြန်နဲ့ပဲ ကျနော်တို့ဆေးခန်းကိုတောင်
> ၀င်မကြည့်သွားပါဘူး။ ဒါတောင် ကျနော့်ဆေးခန်းထဲကဆရာမတွေကလူနာကျဲနေလို့ဆိုပြီး
> သူတို့လာကြည့်တဲ့အချိန်က ညနေပဲဖြစ်နေပြီဗျာ။
> တစ်နေကုန်ကြည့်လာတာလူနာကုန်ပြီပေါ့။ အဲဒါကို ဘာညာစရာရှိလဲဗျာ။ မမှန်ကန်တာ၊
> မကောင်းတာဘာမှမလုပ်ထားဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း
> အရှိအရှိအတိုင်းပဲပေါ့။ အဲလိုမျိုး
> သူတို့တွေပြန်ထွက်သွားပြီးတော့ခဏနေတော့မှ သတင်းထောက်တွေလား၊ UN
> တစ်နေကုန် ကြည့်ထားရတဲ့လူနာတွေကိုတော့ မမြင်ဘဲ
> ဆေးခန်းပိတ်တော့မယ့်အချိန်မှရောက်လာပြီး လူနာက
> ဒါပဲလားဆိုတော့ဘာပြန်ပြောရမလဲတောင်မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း
> ကျနော်ကမှမြို့တွင်းမို့ပြဿနာသိပ်မရှိပါ။ ကျနော်တို့အဖွဲ့ထဲမြို့ပြင်ဖြစ်တဲ့
> သဲချောင်းနဲ့သက်ကယ်ပြင်ကိုသွားရတဲ့သူတွေအတွက်ပိုပြီးတောင် ကသီပါသေးတယ်။
> ကံကောင်းသွားပါတယ်။ ပထမဒီနေ့တာဝန်ခွဲဝေထားတာက
> သဲချောင်း၅ယောက်၊အနောက်စံပြ၅ယောက်ဆိုပြီးခွဲဝေတာပါ။ သဲချောင်းကိုသွားတဲ့အဖွဲ့က
> စောင့်နေရပေမယ့် အနောက်စံပြကိုသွားတဲ့အဖွဲ့ကတော့
> မစောင့်လိုက်ရပါဘူး။ကျနော်တို့စောင့်နေတုန်းမှာပဲ အနောက်စံပြကအဖွဲ့
> အနောက်စံပြမှာ အာပာာရချောင်းဝေနေတုန်း
> သူတို့လူမျိုးအချင်းချင်းအဝေမတည့်ဖြစ်ပြီး ထိုးကြိတ်ရန်ဖြစ်ကြပါတော့တယ်။
> သူတို့အဖွဲ့လည်း စောစောစီးစီးပဲသိမ်းပြီးပြန်လာပြီး
> သူတို့တွေအတွက်တော့ အလုံအလောက်မရလို့
> ဒီလိုမျိုးတွေကဖြစ်မှာပါပဲ။သဲချောင်းမှာတော့ စစ်တပ်ကဝေတဲ့အတွက်
> ပြဿနာမရှိပေမယ့် အနောက်စံပြမှာတော့ စစ်တပ်က
> နောက်ပိုင်းဒီထက်ပိုဆိုးတာတွေသာဆက်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ အခုတောင်အခြေအနေတွေက
> လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ဖြစ်နေပါတယ်။ မနေ့ညကလည်း
> ဒီလောက်ပဲပြောပါရစေ။ စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
> အဆိုးအရွားကြီးတွေမဖြစ်လာတာပါ။ဒီပြဿနာကိုမဖြေရှင်းဘဲ Curfew ကိုရုပ်သိမ်းရင်၊
> ၀င်လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေက အိနြေ္ဒမပျက်ရှိနေပေမယ့်
> ကျနော်ထင်တာတော့ သူတို့ထုံးစံအတိုင်းပဲ မူယာမာယာများပြတယ်ထင်တာပဲ။
> အဲတော့ပိာုကလူတွေဘယ်လိုမှတ်ချက်ချသွားမလဲဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။
> ၂၉.၆.၂၀၁၂။ ။ စစ်တွေမှာရှိနေတဲ့အချိန်လေးတွေမှာ
> ဒီနေ့ကိုလည်း ဆက်ရေးဖြစ်တာပါ။ လမ်းခရီးအတွေ့အကြုံကတော့ တာဝန်ကျတာက
> မနေ့ကစခန်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက် သိပ်ပြောစရာမရှိပါဘူး။ မနက်ဖြန်ပြန်တော့မှာဆိုတော့
> ဒီနေ့မှာ စောစောပဲသွားပြီး စောစောပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ သောကြာနေ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လည်း
> သဲချောင်း၊ အနောက်စံပြစခန်းတွေကနေ နောက်ကျမှမပြန်ချင်တာကြောင့်
> အစောကြီးသွားကြရပါတယ်။ မြို့တွင်းမှာ မြို့ခံဆရာဝန်တွေက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ
> နေ့တိုင်းကုသမှုပေးတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ရဲ့လူအင်အားအများစုကို နောက်ပိုင်းမှာ
> ဘင်္ဂလီစခန်းတွေကို ပို့ထားရပါတယ်။ အဲဒီစခန်းတွေက
> ဆရာဝန်စိတ်ဓါတ်မရှိဘူးဆိုပြီး အပြစ်တင်စရာမရှိပါ။
> ကျနော်တို့အွန်လိုင်းကနေတဆင့် မြင်ခဲ့ရသူတွေတောင် အံတကြိတ်ကြိတ်နဲ့
> ဒေါသထွက်ခဲ့တာပါ။ သူတို့က သူတို့မျက်စိအောက်တင်
> ဘယ်လောက်ပဲဆရာဝန်စိတ်ရှိရှိ ကြိတ်မှိတ်ပြီး
> ကုသပေးနိုင်မယ်မထင်ပါ။ ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးပိုပြီးများဖို့သာရှိပါတယ်။
> ဒါကြောင့်မို့ကျနော်တို့ရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ သူတို့ကိုကုသမှုပေးပါတယ်။
> လူလူချင်းစာနာထာက်ထားပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့
> ညှာတာထောက်ထားတတ်တဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုပြသနေကြတာပါ။ အားလုံးကတော့
> လက်ချောင်းတွေတောင် အတိုအရှည်မညီတာပဲလေ။
> အကောင်းမမြင်တဲ့သူရှိသေးတာ၊ ကျနော့်လိုပမွှားကိုတော့ အကောင်းမမြင်နိုင်တာ
> မဆန်းပါဘူးလေ။ အရင်တုန်းကတော့ ဝေဖန်တာတွေကိုလုံးဝခံနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
> ပြောတဲ့စကားတိုင်းကို ပြန်ရှင်းရမှကျေနပ်ပါတယ်။ အခုတော့ တော်တော်လေး
> အလေ့အကျင့်ဖြစ်လာပါပြီ။ ရှေ့လျောက်လည်း ဒီထက်ပိုပြီး
> ကျနော်ကတော့ မြင်တာနဲ့ငှက်ဖျားလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာမတွေက
> သူ့မှာကုလားခုတ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာရှိတယ်ဆိုလို့ ပိုးဆိပ်များတက်နေသလားဆိုပြီး
> လှန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာပိုးဆိပ်တက်နေတာမပာုတ်ပါဘူး။ ဒဏ်ရာကတော်တော်လေးကို
> ကြီးပါတယ်။ လည်ပင်းအလည်နားကနေပြီး ဘယ်ဘက်ချိုင်းကြားအထိရှိပါတယ်။
> ညာသန်တစ်ယောက်က အနောက်ကနေပြီး လွှဲခုတ်လိုက်ပုံရပါတယ်။ အရိုး၂ချောင်း (Scapula
> and Clavicle) ပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကံကောင်းလွန်းလို့သာ
> အဆုတ်ကိုမထိခိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆုတ်ကိုသာ ထိခိုက်သွားရင်တော့
> ဒီလူကြိမ်းသေအသက်ဆုံးရှုံးမှာသေချာပါတယ်။ ပြောတာတော့
> နာဇီရွာမီးရှို့ခံရတဲ့အချိန်မှာ ကုလား၂ယောက်က သူ့ကိုခုတ်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။
> အခုတော့ သေချာခွဲစိတ်ပြီး ပြုပြင်ထားပြီးပါပြီ။ ချုပ်ရိုးလည်းကောင်းပါတယ်။
> ပိုးလည်းမ၀င်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာသေးတဲ့အတွက် လက်တော့မလှုပ်နိုင်သေးပါဘူး။
> သဲချောင်းနဲ့ သက္ကပြင်တွေမှာတော့ လူနာတွေများတာရော၊
> ကြက်ခြေနီတွေအနာဆေးထည့်တာကို တခြားတစ်နေရာမှာလုပ်တာရောကြောင့် ဘင်္ဂလီတွေဘက်က
> အထိအခိုက်တွေကိုတော့ ကျနော်လည်း မကြည့်ခဲ့မိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်နဲ့ပါလာတဲ့
> ကြက်ခြေနီရဲ့ ပြောစကားအရတော့ သေနတ်မှန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
> ခပ်စောစောတည်းက ကုသခဲ့တာကြောင့် ခပ်စောစောပဲ လူနာကုန်သွားပါတယ်။
> ဒါတောင်သိပ်မရှိဘူးထင်နေတာ စာရင်းစာအုပ်ပြန်ကြည့်တော့ အယောက်၈၀ကျော်ပါတယ်။
> ဒီနေ့တော့ တခြားစခန်းတွေကလည်း စောစောစီးစီးသိမ်းလာကြပါတယ်။
> အားလုံးချောချောမောမောပါပဲ။ စစ်တွေမြို့ထဲမှာတော့ ကုလားအိမ်တွေကို
> ဖျက်သိမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ကိုမြို့ထဲကထွက်ခွာစေရာမှာ
> အကုန်လုံးယူဆောင်သွားခွင့်ပြုပါတယ်။ သူတို့အိမ်တွေကိုတော့
> ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ အတော်လေးတော့ မြို့ပြင်ထုတ်ပြီးသွားပါပြီ။ ဒါတောင်
> တချို့ဘင်္ဂလီတွေကသူတို့မှာ မှတ်ပုံတင်ရှိတယ်၊ သန်းခေါင်စာရင်းရှိတယ်။
> သူတို့မထွက်ခွာနိုင်ဘူးဆိုပြီး ပေကပ်နေနေပါသေးတယ်။ စစ်တွေမြို့ထဲမှာတော့
> အင်အားတောင့်တဲ့ ဘင်္ဂလီရပ်ကွက်က အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်ထိလည်း
> မထွက်ခွာကြသေးပါဘူး။ ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲတော့မသိပါဘူး။ ရွှေ့တော့ရွှေ့မယ်ထင်တာပါပဲ။
> လွယ်လွယ်နဲ့တော့ ပြီးသွားမယ်မထင်ပါဘူး။
> ကျနော့်မှတ်တမ်းတွေကို ဖတ်တဲ့သူတွေထဲမှာ
> ဒီနေ့ကျနော့်Facebookမှာတင်ထားတဲ့ မှတ်တမ်းမှာ
> သိတော့တာ။ သူတို့ပြောတာကို ပြန်ပြောရရင် အစိုးရပာာ သူတို့ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကို
> သေစေချင်နေတာပါတဲ့၊ သူတို့ဘင်္ဂလီတွေရဲ့အိမ်တွေကို မီးရှို့၊
> သူတို့လူမျိုးတွေကို လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်နေတာပါတဲ့။ ကျနော်ပာာလည်း
> လူမျိုးရေးဝါဒီတစ်ယောက်ပါတဲ့။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျနော်က
> သူတို့ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေနဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို တန်းတူအခွင့်အရေးပေးပြီး
> မဆက်ဆံလို့ပါတဲ့။ ဘင်္ဂလီတွေကလည်း လူသားတွေဖြစ်ရက်နဲ့ဘာလို့
> တန်းတူအခွင့်ရေးပေးပြီး မဆက်ဆံရတာလည်းဆိုပြီး အပြစ်ဝိုင်းတင်ထားတာပါ(ရခိုင်မှ
> တ်တမ်း(၇)မှာဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။)။ ဒါမြန်မာနိုင်ငံပါဗျာ။
> မြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့သာသက်ဆိုင်တဲ့မြေပါ။
> သူတို့ပာာ လူမျိုးခြားတွေပါ။ လူမျိုးခြားဖြစ်နေရုံနဲ့တော့ အပြစ်မရှိပါဘူး။
> ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒီလူမျိုးခြားတွေက ကျနော်တို့လူမျိုးတွေကိုရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်၊
> အိမ်တွေကိုမီးရှို့တဲ့နောက်မှာတော့ အပြစ်ရှိသွားပါပြီ။ အပြစ်ရှိရင်တော့
> အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရတော့မှာပဲလေ။ လူမျိုးခြားပာာ လူမျိုးခြားလိုပဲဆက်ဆံခံရမှာပဲလေ။
> ကျနော်တခြားနိုင်ငံသွားရင်လည်း ကျနော်ပာာ အဲဒီနိုင်ငံမှာ
> လူမျိုးခြားဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော့်ကို လူမျိုးခြားလိုပဲဆက်ဆံမှာပါပဲ။
> သူတို့လူမျိုးနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးတော့ပေးမှာမပာုတ်ပါဘူး။ အခုလည်းအဲလိုပါပဲ။
> သူတို့ပာာ လူမျိုးခြားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက် လူမျိုးခြားလိုတော့ ဆက်ဆံခံရမှာပဲလေ။
> ဒါတောင်မှ ကျနော်တို့ဆေးဝါးတွေ၊ အစားအသောက်တွေ၊
> သူတို့မြေပေါ်မှာသာ ကျနော်တို့လူမျိုးတွေ ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရင်
> သူတို့ဘယ်လိုဆက်ဆံမယ်ထင်ပါသလဲ။ အထောက်အပံ့နည်းတာကတော့
> ကျနော့်စိတ်ထင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
> ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေက အကူအညီတွေလှူဒါန်းတဲ့အခါမှာ
> ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုသာ လှူဒါန်းကြပါတယ်။ ဘယ်သူမှဘင်္ဂလီတွေအတွက်တော့
> မလှူကြပါဘူး(ဘင်္ဂလီတွေကလွဲလို့ပေါ့လေ)။ အဲဒီတော့လည်း သူတို့အတွက်
> အထောက်အပံ့နည်းမှာပေါ့ဗျာ။ ဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲ။ ကျနော်ပာာလည်း
> သူတို့လူမျိုးတွေကို ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့တန်းတူမထားခဲ့တဲ့အတွက်
> လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဝါဒီသမားပါတဲ့။ ကျနော်လူမျိုးရေးဝါဒီပာုတ်မပာုတ်ကတော့
> သူတို့လိုမျိုး ကိုယ့်ကိုပညာသင်ပေး၊ ဆေးကုပေးတဲ့ဆရာဝန်ကိုပြန်သတ်နိုင်တဲ့
> လူတွေကြားထဲမှာ ပတ်ပတ်လည်အ၀ိုင်းခံပြီး ဆေးကုသပေးနေတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ပုံတွေကို
> ပြန်ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်ချပေးကြပါ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်တော့
> ပြန်ပြီးမရှင်းပြချင်တော့ပါ။ ကျနော်ပာာ လူသားတစ်ယောက်၊
> မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေကို သတ်ဖြတ်မီးရှို့ခဲ့တဲ့
> သူတို့တွေကို သေလောက်အောင်မုန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအမုန်းတွေကို မျိုသိပ်ပြီး
> လူလူချင်းစာနာမှုနဲ့ကုသမှုတွေပေးနေခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ လူနာကုသချိန်မှာ
> သူတို့လူမျိုးတွေကို မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ ဆေးအမှားများပေးခဲ့မိရင် ကျနော့်ကိုယ်
> ကျနော်သတ်သေပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ရှင်းပြရအရာမထင်ပါဘူးလေ။
> ကျနော်တို့ကသူတို့ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကို လက်မခံပေးတော့ ကျနော့်ကို Uncivilized
> person (ယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့သူ)ဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးသွားပါတော့တယ်။
> ရှေ့လျှောက်ချိုသည်ခါးသည် ပြန်လဲ မပြောချင်တော့ပါဘူး။
> ကျနော့်လုပ်ရပ်တွေမှန်လားမှားလားဆိုတာကို သိလာကြပါလိမ့်မယ်။
> စာလည်းတော်တော်ရှည်သွားပါပြီ။ ဒီနေ့မှတ်တမ်းကတော့ နောက်ဆုံးမှတ်တမ်းပါပဲ။
> ကျနော်တို့ရဲ့ စစ်တွေခရီးစဉ်ကို ဒီနေ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီ။ မနက်ဖြန်
> နေ့လည်၁နာရီလေယာဉ်နဲ့ ရန်ကုန်ကိုပြန်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
> ကျနော့်မှတ်တမ်းတွေကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ဖတ်ပေးခဲ့ကြတဲ့၊ကျနော့်ကိုအားပေးခဲ့ကြတဲ့
> သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by Travel at 6:34 AM0comments
Free Conference Seminar: Your Role asaSAP Functional/Technical Consultant onaproject - MM WM FICO HR/HCM BIBW ABAP with ASAP methodology
Do you know what you will be doing onaproject once you land onaSAP functional/technical job - You are probably thinking about getting into SAP world or you are getting trained currently and will eventually get into the job soon, here is an opportunity to know whataSAP functional/technical consultant do onanormal basis ataclient onahigh level. Also Know about ASAP methodology during this session.
There isafree seminar that you can listen in and getagood idea on your possible roles onaproject asaSAP Functional/technical consultant. Here it fromaproject manager so you know the best information. Register in advance and reserve your seats - 9:30 PM - 10:30 PM EDT ( Eastern time, please convert to your correct timezone )
Conference Meeting Details: Click below or copy paste to your browser:
Mon, Jul 2, 2012 9:30 PM - 10:30 PM EDT
Mon, Jul 9, 2012 9:30 PM - 10:30 PM EDT
Mon, Jul 16, 2012 9:30 PM - 10:30 PM EDT
Mon, Jul 23, 2012 9:30 PM - 10:30 PM EDT
Mon, Jul 30, 2012 9:30 PM - 10:30 PM EDT
| 101ERP.com |Phone: 1-866-965-4447 | Email: sap@101erp.com | Office: 100 W Big Beaver Road Suite 200 Troy MI 48084 |
Posted by Travel at 2:56 AM0comments
Posted by Travel at 12:38 AM0comments
Re: Please reply !!
On Fri, Jun 29, 2012 at 6:31 PM, kyaWmyaT"hwin <kyawmyathwin@gmail.com> wrote:
I heard that One of the travel agent (well know ) is organizing to punish for FDI hotels on current issue,,, room rate &unable to accept the booking ...... something like this and they contacted each other and telling that to keep secret......Any news ???I m from Asia Paradise Travel.
On Fri, Jun 29, 2012 at 2:16 PM, Bo Saw <saww.myanmar@googlemail.com> wrote:
Seem3similar names ;
Famous hotels are
2.Royal City hotel
3.Royal hotel may be apart of them
On Jun 29, 11:54 am, thu thu <mayth...@googlemail.com> wrote:
> I would like to know Royal Hotel mandalay address. very urgent for me.
> Ma Thu
> Green Holiday Travels & Tours
Posted by Travel at 10:27 PM0comments